Isi - azu
Psychosaurus na-ewebata onwe ya:
Echere m na uri na abughi onye meturu biofant. Ndị ọbịa a na-eji ohere na-abanye na mbara igwe n'ụzọ iwu na-akwadoghị ma na-eji proboscis ogologo ha iji mee ka echiche ndị mmadụ na-ero ụra site na ụbụrụ ha. M na-eji okwu ndị ọzọ ekwuola n'egbughị oge. Achọghị m nke ahụ. Ọ bụ ya mere m ji ebukarị okwu ọhụụ, nke na-ekepụta nsogbu ahụ na enweghị onye ghọtara m ọzọ. N'ihi ya, a ga m eji okwu ndị ọzọ ejiri mee ihe, nke German n'asụsụ German sụrụla ozugbo. Asụsụ nwere ike ikwu okwu maka na ọ na-ekwupụta ihe niile gbasara ịdị adị. Isi ihe n’asụsụ bụ inye foto nke ụwa ụlọ. Ọ bụ ihe nwute mgbe mmadụ gbasoro okwu nke asụsụ wee chee na nke a na-eche.Echiche siri ike na-akpụzi asụsụ. Asụsụ bụ m nke psychosaurus, ọ bụ ebe etiti ya. Uwa bia n’ezie na asusu, nihi na ikwu okwu putara: imeputa uwa. Na mbu ka okwu ahu diri!
Mole: Gwa Psychosaurus ihe akwụkwọ a bu
Psychosaurus: N'akwụkwọ a, asụsụ na-ekwu okwu n'onwe ya
Asụsụ na-ekwu ihe niile, yabụ akwụkwọ a nwere isiokwu ọ bụla.
Duck: Ajụjụ nke onwe: kedu ihe dị iche n’etiti
ndị Psychosaurus na Carsten?
Psychosaurus: Achọghị m ikwu banyere nke ahụ, isiokwu ahụ na-akpata nrụgide
Duck: Ọ gbagọrọ agbagọ, dude!
Mole: Akwụkwọ a doro anya na ọ bụ otu
Psychosaurus: Ọ bụ otú ahụ.
Nke a na-abawanye oke enweghị atụ.
Asụsụ ahụ kwuru ihe karịrị otu puku okwu.
Giggle: Ọ bụrụ na m chọrọ idere Carsten akwụkwọ, o nwekwara ya
ịntanetị ma ọ bụ ihe?
Psychosaurus: N'oge a, o nwere adreesị ozi-e
carsten-stemm@web.de yana ya nwere ntaneti.
Giggle: Aghọtaghị m otu okwu, ọbụnadị ọdụ ụgbọ oloko.
Rabe: I gaghi aghota ihe niile. Oge ụfọdụ ezuola iji pụọ
kwee ka okwu bie n’agha.
Detlef okpukpu abụọ dooid
Detlef Doppeldoid enweghị ike iche echiche nke ọma na akụkụ abụọ nke ụbụrụ. Detlef na-eche ngwa ngwa karịa ọkụ, nke na-eduga n'ịgbanwe oge na mbara igwe ya. O we were ukwu laghachi, were kwa aka-ya were ab withata, were kwa à ju-ya. Ọ maghị ma i banye n’ime ụlọ ma ọ bụ n’ime ụlọ. Ọ bụ ihe ọjọọ gbasara Detlef Doppeldoid: ụbọchị ọzọ o chere na ndị mmadụ bụ ndị mmadụ. Detlef enweghị ike icheta ọdịiche dị n’etiti Albert Einstein na Konrad Adenauer. Detlef Wonder: abụghị '' otu '' na '' ọ bụ 'otu'? Mgbe ụfọdụ Maazị Doppeldoid na-emehiekwa mmejọ mmebi iwu na ọnọdụ nke ọnọdụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ gbagwojuru anya, Detlef ọbụna na-echeta ọdịnihu.
Detlef kwuru, sị:
'' Mgbe obula amaghi m onye m bu, ana m elebanye anya na kaadi amata m: Enwere m nọmba nke m ebe ahu; ọnụ ọgụgụ, ha niile bụ naanị m, naanị maka m. Pụrụ iche na enweghị nchekasị. Steeti hụrụ m n'anya. Ma nke ahụ ọ na-enyere m aka? Kedu onye nọ n’azụ aha Detlef Doppeldoid? Gịnịkwa ka obere kaadị rọba na-egosi? Ọ dị mfe ịhapụ kaadị plastic. Nwere ike ịgha ụgha ihe niile taa. Nwere ike ọbụna adịgboroja njirimara. Aghọwo m nnukwu iyi. ''
Na-ekwu okwu ewi
Oke bekee nwere ike ikwu okwu ka ana-akpọ oke bekee. Oke oyibo na-ekwu okwu na-eri ihe ma na-ekwu okwu mgbe ọ na-ekwu okwu. Onye amaghi ihe o bu. Ọ nọ ugbu a na-eri ịhụnanya. Lovehụnanya bụ naanị okwu nye ya, mugg, mampf. I nwere ike iri ihunanya n’enweghi eri, nke ahu bu amamihe nke oke bekee.
Onye ọkà mmụta ihe omimi nwere mmasị na ábụbà nke ọbọgwụ ahụ, ọkà mmụta banyere ọrịa ahụ nwere mmasị ịbụ abụ nke ọbọgwụ ahụ. Onye na enye ducks? Azịza: The 'ya'. Ọ bụ ya ma nyekwa ya ịdị. Ọzọ, onye nwere ike ịza ajụjụ a dịka ndị a: evolushọn na-enye ducks, duck egg give ducks, sex duck na-enye ducks, Chineke na-enye ducks. Mmiri na-ezo. Otu onye kwesịrị ikwu n’ezie: Igwe ojii na-ezo. Nke a 'ọ' esighị n'aka Chineke, n'ihi na ọ pụtara: Chineke dị. Nke ahụ pụtara na: 'Ọ' karịrị Chineke. Nkwubi okwu ozo gabu: ‘O’ bu ezi Chineke bu onye mbu n’enye Chineke uzo. Enwere ducks. Otu onye ekwughi: o were ducks. Inye ihe na-atọ ụtọ karịa ịnara. Inye ihe nwere ike ịbụ ihe gbasara mmadụ karịa inwetara ya. The 'ya'doro anya nke na ị gaghịzi ahụ irighiri ahụ. N’ihi nke a, ị gaghị echezị ebe ebe ọbọgwụ si abịa n’ezie. 'Ọ' dị aghụghọ. Ọ na-eme ka ọ bụ ihe ọmụma. Ọ bụrụ na anyị amabeghị na igwe ojii na-ezo, ọ 'Mmiri' na-ezo. Nlebara ahụ nyekwara 'ọ': '' Enweghị Elwititsche! '' Cannye ga - abụrịrị 'ọ' onye nwere ike inye ndị na - abụghị ducks a?Enweghị Elwititsche! '' Cannye ga - abụ 'ya' nke nwere ike inye ndị na - abụghị ducks a?Enweghị Elwititsche! '' Cannye ga - abụ 'ya' nke nwere ike inye ndị na - abụghị ducks a?
Goldmarie na Pechmarie
N'otu oge, enwere onye ọzụzụ na-akpali akpali nke nwere ụmụ nwanyị abụọ, aha ha abụọ bụ Marie. Otu bụ onye na-arụsi ọrụ ike, onye nke ọzọ dị umengwụ. Otu ụbọchị, nwanyị ahụ na-arụsi ọrụ ike bịara n'otu olulu mmiri sị:
'' Ọ nweghị mmiri ọ drinkingụ drinkingụ! ''
Nwanyị ahụ akpịrị na-akpọ nkụ kwuru, 'Ọ bụ naanị ebe ahụ maka ihe ndị metụtara iwu.' Nwatakịrị nwanyị ahụ theụrụ mmiri wee accidentụọ iyi, wee daba na isi iyi ahụ, wee mee ka ọ ghara ịma. N'otu oge, ọ tetara n'akụkụ ebe amaghị ya.
Otu agadi nwanyị guzo na windo ụlọ nke chọrọ nrụzigharị wee tụọ ohiri isi ya. Mazị Holle, dịka akpọrọ onye ọbịa ahụ, gwara nwa agbọghọ ahụ, sị: "Ndị nọọsụ nwere ikike ịkpa ndị agadi dịka ị dị ụnyaahụ, enwere ọtụtụ ọrụ maka m." Ma n'ihi na nwanyị ahụ na-arụsi ọrụ ike nwere nnukwu ọrụ na ọrụ, ọ rụrụ Mịnịsta Holle.
Ma mgbe obere oge gachara, nwa agbọghọ ahụ bidoro nwe ụlọ agụụ wee gosipụta mmụọ ọ ga-ekwe ka ahapụ ya laa. Frau Holle nyere ya ikike a. Nwanyi ochie duru nwa agbọghọ ahụ n’ọnụ ụzọ ọ ga-esi banye. Ka nwanyị ahụ na-arụ ọrụ na-agabiga n’ọnụ ụzọ, mmiri si n’elu na-ezokwasị ya, olulu mmerụ mmiri nke na-esighị n’ahụ ya. Nwatakịrị nwanyị ahụ kwuru, sị: '' Iberibe ehi! M ga-eji ịbọchi m nweta ihe m ga-eme. M na-amụ mgbakọ na mwepụ ma na-eme PhD m na usoro izi ezi nke ihe arụ. ''
Mgbe nne hụrụ nwa ya nwanyị ka o ji mkpọda jupụtara, ọ kpọrọ nwa ya Pechmarie. N'ihi ihe eji akwụghachi ụgwọ ego, nne zitere nwa ya nwanyị umengwụ n'olulu ahụ. Ọ mere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ihe ahụ. Naanị nwa ya nwanyị nke abụọ bịara n'ụlọ ọzọ nke otu nwanyị bi na ya, kama n'ụlọ nke Ms Holle.
Mgbe ọrụ nkeji iri gachara, ọzụzụ nwa agbọghọ ahụ dị umengwụ belatara nke ukwuu. Nwaanyị Hell kwuru, sị: 'Mgbe m dị afọ ndụ gị, abụ m onye nzuzu. Enweghị m akwụkwọ ọ bụla maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Anyị na-agba ọsọ ugbu a rue Château Mouton-Rothschild 1945, nke ọgọ m nwoke zuru ya.
Ọ dabara nke ọma, ụlọ dị n'okpuru ya zuru oke. '' Mgbe otu izu gachara ị -ụbiga mmanya ókè, onye umengwụ ahụ nwesịrị agụụ ụlọ ma chọọ ka ahapụ ya n'ụlọ. Frau Hölle duuru ya gaa n'otu ọnụ ụzọ ahụ Pechmarie si gafere. Mgbe nwa agbọghọ ahụ dị umengwụ gafere n'ọnụ ụzọ ámá, mmiri na-ezo n’elu ya. Ugbu a nwa agbọghọ ahụ bara nnukwu uru karịa, n'ihi na enweghị ike iwepu ọla edo ahụ. Mgbe ọ latara, nne ya kpọrọ ya Goldmarie. N'iwe iwe n'ihi ikpe na-ezighị ezi nke ndụ, nne ahụ hapụrụ ụlọ chọọchị ahụ wee gaa ikpe nke ụwa. Pechmarie mechara bụrụ onye prọfesọ izizi nke arụmụka dioxin dị ya n'obi. Ndụ ya nwere nsogbu zuru ezu. Otú ọ dị, Goldmarie biri ndụ obi ụtọ mgbe ọ bụla. > Njedebe obi uto
Onye na-azụ atụrụ: Gwa m, olee akwụkwọ ị na-ebu n'okpuru ogwe aka gị?
Wolfgang: Otu n’ime atụrụ gị nyere m akwụkwọ maka ụbọchị ọmụmụ m. Aha ya bụ: Mee anụrị atụrụ n’onwe gị!
Onye Ọzụzụ Atụrụ: Nke a kwesiri ịbụ egwuregwu?
Wolfgang: A gaghị eji aghụghọ egwuri egwu. Anaghị m egwu egwuregwu. Onye ọbụla na-achị ọchị na-eche oke ụjọ. Anaghị m egwu egwu. Ọ bụrụkwa na onye ọ bụla achịọ m ọchị, m na-apị aka ya n'ịnyịnya ibu m.
Atụrụ: Cheregodi ma ọ bụrụ na m etinye aka, mana agbanwere mkpụrụ ndụ ihe nketa m, yabụ m nwere ike ikwu okwu. Enwere ụtụ isi ọhụrụ na chiiz atụrụ n'oge adịghị anya?
atụrụ ọzọ: Mụ onwe m bụ onye nrụpụtarala nke okike, ana m asịkwa gị: ụmụ nwoke dịka ụmụ nwanyị, naanị ụzọ ọzọ gbara gburugburu.
Wolfgang: Echere m na ọ ga-adị iche!
Onye Ọzụzụ Atụrụ: M na - ahụ nkụ site na ụdị mkparịta ụka ndị a gbagwojuru anya. .. Ehee, lee onye na-abịa! Ọ na-akpụ ụkwụ!
Wolfgang: Mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ ntụnyere!
Onye Ọzụzụ Atụrụ: N’ihi gịnị?
Wolfgang: N'ihi na ị na-ekwu mgbe niile: atụmatụ ọ bụla!
atụrụ a na-emegheri: nke pụtara na-echekarị mgbe nile. Ya mere onye na-ekwu okwu na-ekwe onwe ya ngwa ngwa n'okwu ya. German abuo a bu Lapsus Freudianikus, ihiwe nke na-egosi oke nke oma.
Wolfgang: Olee ụdị onye kparịtara ụka bụ?
Onye Ọzụzụ Atụrụ: ụmụ atụrụ ahụ mụrụ ihe. Psycholinguistics ma ọ bụ ihe.
(Aka mmachi abiala ndi otu mkparita uka).
Mmachi: are na-eso m n’azụ. Ezuru m ahia m
Plutonium sitere na ihe ọkụkụ nuklia nke Russia agbagbuola!
Onye Ọzụzụ Atụrụ: Emela ihe, Otto!
Atụrụ: ị nwere ike rie plutonium?
Onye Ọzụzụ Atụrụ: Ọ bụghị atụrụ niile mụrụla!
aturu nile diri onu: Mähhhh!
Otto: Enwere m otu ụzọ m ga - esi: igbu onwe ya!
Wolfgang: M ga-enwe ụzọ ọzọ pụọ. Ama m ezigbo onye anwansi n’agba egwuregwu. Ahụhụ ya na-arịa ya, mana ọ wa ahụ.
Otto: isnye bụ dibịa a?
Wolfgang: Ọ bụ ya bụ ihe ị chere na ọ bụ, maka na o nwere ọtụtụ
Mbara ala n'ụlọ nke asaa, gụnyere Pluto.
Otto: Ekwetaghị m ịgụ kpakpando!
Wolfgang: Ma kpakpando kwenyere na gị!
Otto: Nke oma, achoro m nwaa ya, nihi na onwebeghi ihe ozo anyi choro ime. Ejiri m oku na oke bekee ma dee aha m n’azụ ka onye obula ghara ima m.
Atụrụ: nnukwu ihe! Ugbu a nke ahụ bụ njedebe obi ụtọ n'ezie!
Na mkpa, apụl na -eri pears.
Enwe Ezigbo ehihie, anya dị ụkọ, ị nwere anya abụọ.
Anya dị egwu: you're bụ enwe, gị enwe.
Enwe: Enwerem ogugu dynamite ebe a.
Nye ka anyị na-etinye ha n'ime ịnyịnya ibu?
Anya dị egwu: N'ezie! Na TNT a sị m mba!
Gi nwa amuma mara nma, i tosiri inweta ihe nrite Nobel!
(Anụ a na-emegharị anụ ahụ o ji ebu ibu mee ka ọkụ ahụ dajụọ. Ọ na -eme ka elekere akwara na-echere, a na-eme mkpọtụ ike: ájá, irighiri anụ na anụ ahụ kpuchie ebe ihe ahụ gbawara.)
Enwe: daa! Ọ dara!
Onweghi onu ogugu ma obu paragraf anyi diri anyi.
Ugbu a, anyị ga-eri unere. Haha!
N'otu oge enwere obere ụgbọ ala nke ihe nlegharị anya na-agagharị na plump na ọdịdị dị nro. Agongbọ ahụ na-akpali, ịnyịnya na-adọ ya. Vehiclegbọala nke na-anaghịzi anya ụgbọ elu taa. Mgbe onye otu ahụ bidoro ịnya ụgbọ ala ahụ, trolley ahụ ghọrọ nchara, mgbe a ka na-adọkpụkwa chara chara ahụ, ifuru agbaji ma mmiri chara acha. Ihe nzuzo nke ndụ biri na wiil igwe, ebe a ka wiil ahụ gbara na mmiri. Thegbọ ala ahụ bụ ọmụmụ nke nwa nwanyị ígwè. Ihu igwe gbatịrị, mbara igwe agbatị, obi dị ya ụtọ. Nwa ọkụkọ na-agbapụ na mbara igwe na mgbachitere agbachitere. Ọ bụ Agha Worldwa nke Abụọ, ịgbalị mbọ ike iji mee ka ọ bụrụ ịnyịnya ọzọ. Nwa nchara bụ ugbu a bụ ịnyịnya n'onwe ya, yabụ ọ na-enwe pometail. Anyịnya na-ama mma,dika ị maghịzi ịchọ mma n’oge ogo. Plastik bụkwa ígwè. Ihe ọ bụla nke na-adaghị n’agha bụ ígwè. Ga-atụ egwu maka ịma mma na-abụghị nwa bebi.
Otutu ime-ulo bu ime-ulo kariri n’ime ya. Dịka ọmụmaatụ, bọọdụ imirikiti, dị ka kọbọd ime ụlọ nkịtị. Ma ọ bụrụ n’ị ga-ezo n’ime kọbọd ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ ga-eju gị anya ịchọpụta na ụyọkọ kpakpando niile dị n’igbe ahụ. Ihe ndia abughi ihe anakpo odi ha nihi nihi enweghi oxygen. Ofwa juputara n'olulu nke eziokwu. Ma ndi ozo di iche.
Ihe egwu na-eyi gi egwu. Ihe mberede ahụ abanyebeghị. Ma ọ nwere ike ịmalite n’ọdịnihu; nke ahụ bụ ihe egwu. Ndụ enweghị ntụkwasị obi. Don't maghị ma ndụ ahụ ga-agbaji oge ọzọ. Ihe egwu dị n'ọnụ ụzọ, ihe ize ndụ enweghị atụ, ọ nwere ike bụrụ nro. Ndị na-akpa anụ ọjọọ dị ize ndụ; Ndị ikeketekpo tinyere. Ọ dị njọ ịtọba Igwe eletriiki n'ime tub nke mmiri jupụtara. Married lụọ di dịkwa egwu. N'aka nke ọzọ, mkpuchi ndụ na-ekwe nkwa nchebe: ọ bụrụ na ịnwụghị ndụ, ị ga-enweta nke ọhụrụ. Kpachara anya maka nduhie inshọransị: ụlọ ọrụ ịnshọransị na-aghọ aghụghọ!
Na-eche echiche nke njegharị n’ala nke nwere nzube. Ofzọ iche echiche siri banye n'oké ọhịa. Uzo o ji eme njem na-eme ka iche echiche siri ike ma mechaa soro ya chee echiche na echiche nrọ ya.
Fred hụrụ chi na ekwentị na Olympus:
Fred: Ndeewo Chukwu!
Ogologo oge ole ka chi ndị ahụ ji ekwentị.
Chukwu: eei, I ghazie. M nwekwara ike ịgwa ndị ọrụ ibe m okwu telefon, ma anyị chọrọ chi ga-eme ka ndị mmadụ ghọta ha.
Fred: Ya mere, Aghọtaghị m ya!
Ọkachasị ụbụrụ bụ oke bekee nke mkpasu iwe. A na-akpọkwa ha isi isi. Efu akwara gị adịghị oke mma, mana ha dị ogologo. Tụfuo oghere ndị dị warara n’isi isi ha n’ihi na ha nwere ọtụtụ mmụọ ụbụrụ. Neurolants bụ ụdọ uche. Neurolants nwekwara ike ịbụ ogwe osisi nke ị gaghị enwe ike ịhụ ọhịa ọzọ ọnụ ọgụgụ dị ole. Ma n'ezie Neurolanten bụ mkpụrụ osisi maka iri nri ọgụgụ isi.
A na-akpọ ụfọdụ ndị ụbụrụ ụbụrụ. Nkà ihe ọmụma n’echeghị ị drinkingụ mmanya, ọ bụ ìhè n’enweghị ịhụnanya. N’ọnọdụ nke ihe ọmụma, onye na-eche echiche nwere ike ịkpa ọchị ọjọọ. Cacti achịghị ọchị. Nkuzi siri ike dika chi ochie. Ndị ọkà ihe ọmụma n'ụzọ na-agwọ ọrịa na-amalite ide uri.
Fred: know ma ihe Detlef, a kwalitere m ịbụ mmụọ.
Fred: Ọ dị otú ahụ! Enwere m ike ịchọta azịza nye ajụjụ niile, ọ bụrụ naanị na enweghị nghọta, mana achọpụtara m azịza ya.
Detlef: promonye kwalitere gị?
Fred: Nnukwu onye isi!
Fred: Abụ m demigod. Anaghị m anwụ anwụ, mana m na-arụ ọrụ na ya.
Detlef: Mm, mee nke ahụ.
Fred: Emechara m mata, dịka ọmụmaatụ, ihe kpatara banana a gbagọrọ agbagọ.
Detlef: Ee, gịnị kpatara gịnị?
Fred: Ọ na-atụ anya ịdị n’otu, unere chọrọ ịlaghachi na paradaịs, ọ ga-achọ ịbụ onye okirikiri, mana ọdịda ahụ gbochiri ya, naanị ike ya na-agbasa na mbido.
Detlef: Lee ụdị demigod maara!
Okwu a bu '' mmuo '' bu ezigbo okwu. Okwu ahụ kwesịrị ịkọwa ọtụtụ ihe. Ọgụgụ na-egbutu okwute; uche na-ejikọ. Mmụọ na-eme ka akụkụ ụwa dị ọkụ dị ka anwụ wee na-enye ha ọdịdị. Uche bụ ihe onyonyo maka ihe. Mind na-eji obere ihe nwere ntakịrị ihe. Uche nwere ike iche echiche, ọgụgụ isi nwere ike iche naanị ma ọ bụ jikọta.
ihe kpatara ya
Onye na-egwu bọl na-eji bọl ya bọọlụ, nke na-emegharị bọl ọzọ. Echiche a na - akpata ihe na nsonaazụ bụ ebumnuche nke sayensị. Logic gosiputara ya, o dighi akowa ihe o bula. Ezoro nnwere onwe nke onye na-egwu bọlbụ n'echiche ụwa a. Ihe ndị na-akpata ya bụ ụmụ anụmanụ dull, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ehi. Na-eme ka mmadụ kwenye site n'ike, ọ bụghị site na nzube.
Fred: Ekwere m n’uche. Ejiri usoro mbara igwe niile ahazi ya. Agbanyeghị, ụmụ nwanyị abụghị akụkụ nke cosmos. Iche echiche ziri ezi na-enyere gị aka iru ihe mgbagwoju anya. Just ga-etinyerịrị nnukwu echiche.
Arnold Heitermann: Logic anaghị emepe ka anyị nweta ihe ọmụma. Ihe omuma atu: E nwere ndi nkpisi ato no na nkpisi. Onye na-egbu nnụnụ na-abịa ma gbapụ otu n'ime nnụnụ ndị ahụ.
Arnold: Nnụnụ ole ka dị n ’ahịhịa ugbu a?
Fred: E nwere ndị nnochi abụọ dị n’elu nsu.
Arnold: Njọ! A ka nwere oke igwe nọ n ’nsu!
Fred: Ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya!
Arnold: Nke ahụ bụ ihe ezi uche dị na ya. Nnụnụ ahụ a gbara gbagburu dara n'ala. Otuowo iba ama okop ndịk ndien enye ama efehe. Ìgwè mmadụ nke atọ tụrụ ụjọ na akụ ahụ wee bụrụ naanị nnụnụ a ịnọ ọdụ.
Fred: Ọ dị m ka arụrụala m ikpe a, mana ọ bụ ihe ezi uche dị na ya.
Arnold: Ọ dị mma, ị nwere ike iji ezi uche kọwaa ihe niile na enweghị ihe ọ bụla.
Fred: Nke mbụ, emesịa.
Arnold: Ee, oge niile emechaa.
Kaosinadị, eziokwu dị tupu mgbe ahụ.
Fred: Gịnị ma ọ bụrụ ndị nrịgo ise nọduru na mberede mgbe a gbara ya?
Arnold: Mgbe ahụ mkpirikpi ụfọdụ ike ndụ ga-anọdụ na olileanya nke ịbụ onye a gbagburu.
Fred: Ọ dị mma n'ezie, gịnị bụ ihe ezi uche dị na ya.
Arnold: can nwere ike iji ezi uche kọwaa ihe niile, ọbụlagodi na-enweghị isi.
Fred: Nwoke, nwoke, ekwesịrị m ichebara ya echiche.
Arnold: Mana biko kwụsie ike.
Fred: Um ... ee… ya mere…
Socrates: Kedu ihe ị dị ka nke ihu ọzọ n'ụtụtụ a, Plato!
Plato: Mechie, ịnyịnya ibu!
Ogbenye nwere oke onwe ya, ọ ga-enwe ọchịchọ ịmụ amụ ma ọ bụrụ na mụnyere ya ọkụ. Ma ọ dịghị onye na-emenyụ ha. Bọọlụ ahụ na-agbaze dị ka apịtị na amaghị ibe. Kedu ihe kpatara bọọlụ ji egwu? Ha na-atụgharị n'ụzọ, ma agbanweghị ọdịdị ha. Na ngwụcha, ngagharị na-atụgharị ha. Mgbo na-aga n'ihu. Ugbu a ka m chetara: mgbọ bụ nwanyị!
(na) zuru oke
Nkịta n’onwe ya bụ echiche nke nkịta. Echiche nkịta dị ka ihe na-adịghị mma, mgbapụta ọla edo, atụrụ, ma ọ bụ ọbụna poodle? Anyị maara ihe gburugburu dị ka ya na ya. Enwere naanị otu gburugburu ma ọ gbaa gburugburu. Triangles emeela ka o sie ike karị: Kedu akụkụ echiche nke triangle nwere? Gburugburu bụ naanị echiche a ga-adọta. Nweghị ike ịdọta nkịta ahụ n'onwe ya, naanị nkịta a kapịrị ọnụ. Enwere ike ịdọrọ gburugburu ahụ. Anyị a ga-efe ofufe gburugburu? Enwere "onwe ya"? Ihe na-egosi naanị “maka m”? - Onye zuru oke n'eziokwu ezughi oke aka maka ndu adighi. Ndụ chọrọ nkuku na gburugburu ma ọ bụ oghere n’ime akụkụ anọ. Ihe zuru oke dị naanị dị ka echichenihi na n’ezie, onye zuru oke apughi idi. Gburugburu nwere akụkụ na izu-ike nke ndụ. Ihe na-eme ka obi aka bụ bọọlụ angular. Ọ na-amị mkpụrụ na ezughị okè dịka ndụ zuru oke. Na agbanyeghị, osisi nwere nkụ na-arịa ọrịa n'ụzọ ụfọdụ. Maka gịnị? Naanị hedgehog maara nke ahụ!
Okirikiri enweghị iku ume. O nweghi ebe o nwere ike igba iku ume. A ga - ahụ okirikiri n’onwe ya dịka oghere. Ọ bụ okirikiri dị n'ọnụ ụzọ ọzọ gaa ụwa ọzọ? Enweghị m ike ịlele nke ahụ n'ihi na okirikiri anaghị ekwe ka m bata. Ọ mechibidoro. Mmadu ekwesighi ịlụso ụdị ndị ahụ anya. Gburugburu ahụ anaghị agwa m okwu, ọ ga-anọgide bụrụ ihe omimi. Circle nwere ike ọ nweghịdị ihe ọ ga - ezo: ọ bụ ihe nzuzu, ihe na - agwụ ike. - Gburugburu bụ agba nke gburugburu. Agba a di oke obere ma enweghi aha. Thezọ kachasị mfe iji kpọọ agba bụ '' yi agba ''. Egwuregwu a nwere ike ịga n'ihu na njem na-enweghị okirikiri na eriri. Ndụ n'onwe ya bụ ihe ịtụnanya taa, ndị otu a na-eche ihe ọhụụ. Mana okirikiri ahụ emeela agadina echiche ya banyere nke ọhụụ enweghị ike iwepụta ara. Agbanyeghị, philistines adịghị anọchi anya. Ọ dị egwu nke ahụ. Otu a choro ibu otu okuko ma juo ebe ndi n’ere aka ka ha mechie ya. Onye ode akwukwo bu akuku. Ọ kwụsịrị jọrọ njọ.
Mkpụrụ osisi apụl na-eche echiche ma na-eduzi ube.
Etu di egwu
Gbasi mbọ ike bụ ngwaa zuru ụwa ọnụ. Tinggba ama bụ ihe egwu dị egwu. Emegorogo ọrụ a n’ime Oge Nkume. Inwere ike imeghe anya gi. Legide n’ime duden, kụrisịa windo, ma ọ bụ kụọ mmadụ aka n’ihu. Ndị na-akụ egwu ji mkpọtụ na-eme mkpọtụ. Ọfụfụ ahụ dakwasịrị gị. Ndị 1.FC meniscus kụrụ Rosenheim ewepụghị ụkwụ 2-1. Onye obula merie. Thezọ kachasị mma iji tụọ bụ na okwute. A na-akpọ okwute mara mma ka hama. Etu bụ nke na-esi ike. Igha bu ihe nzuzu na atom. Ibe akụtu, gbaji, tufata nkewa. Nwatakịrị ịkụ ọkpọ. Nwa ojoo. Nwa ọzọ kụrụ aka na-akụ ihe. Nwatakiri a dika nke ozon'ihi na o nwere anyanwụ karịa n’iru. Atingti ọkpọ na-eme aka, yabụ omume ya na-enweta afọ.
Ọrụ aka bụ nkwenye nke ahụmịhe mmadụ niile. Enwere ahụmịhe nke ekwenyela nke na ọ na-eme ka ọ bụrụ ọrụ ọrụ nka. Akụ ọrụ ahụ na-ebute ihe mmadụ niile dịka ndọta sitere na mmụọ. Werkschatz bụ Wikipedia nke ndụ. O di nwute na enwere atụrụ ojii n’ akụ nke ihe omuma: a na-akpo ha unyi ulo oru.
Maka Eze Orthos, ịchị achị pụtara ịhazi ihe dịka obi ha si dị. Orthos anaghị enye ndị mmadụ uche ya. Eze achọghị ịmanye ihe, kama ọ na-achọpụta ihe ha na-amaghị ma kwe ka ha hazie onwe ha. Ndị mmadụ, ewu na anụmanụ ndị ọzọ bi na Orthos Reich, ha niile guzo ma na-eje ije n'ọnọdụ kwesịrị ha. Mgbe ọ nwụsịrị, Eze Orthos ga-abanye na mmiri nke osimiri kachasị amasị ya, nke ga-emesịa banye n'oké osimiri. Site n'oké osimiri, ọrụ ya ga-aga n'ihu na-eduzi ndị mmadụ.
agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ
Agụụ na-achọ iri ihe mgbe niile. Agụụ na-adabere kpamkpam n'ihe ọ chọrọ. Ma nke ahụ bụ kpọmkwem ihe na-eme ka agụụ nwee obi ụtọ. O juputara na ndu, ufodu na asi na odi ndu n'onwe ya. Aguru nwekwara nwanne: aha ya bu "agu". Ma nke ahụ bụ naanị maka ụdị ara dị oke njọ.
Mkpa bụ ịnakpo agụụ na akpịrị ịkpọ nkụ. Mkpa dara ogbenye. Mkpa bụ ego na mgbe niile na-ese otu agba. Can nwere ike chekwaa mkpa gị n’oge ọbụla. Mkpa ọ dịghị amị mkpụrụ, ọ na-anọgide ewepụghị. Needsnye chọrọ ihe, na-aga ahịa.
Kedu onye chọrọ eriri? Karịsịa, ọ bụrụ na ha nwere naanị obosara. Ndị na-egbu egbu na-egbu egbu. Ha na - emeju ihe efu, mana ha na - eme onwe ha. Ọ bụ ọdịdị na-enwu.
Psychosaurus nọ na njedebe ikpeazụ:
Ike ice dị ka ọnụ ọgụgụ buliri ogwe aka ya elu. Efere mmiri si na ihu jụrụ. Anya nwanyị nke onyinyo na-enwu dị ka anwụ abụọ n'abalị. Ọ bụghị ruo ogologo oge. Ọkụ gị apụọla. Nwanyi na-achaji ndo na-efe efe na mbara igwe dị ka mmụọ ojii. Ebe amaghi ebe bu umu mgbei. Ebe ọ dịbeghị onye ọ bụla, ọ nweghị onye ọzọ ugbu a. Ihe omuma m nke adighi adi bu ihe ozo n’akuku oghere. Anọ m na-ekpo ọkụ, mana a na-ekpo oku dị ọkụ, n'ihi na enweghị m ahụ ọzọ. Iti mkpu na-enweghị ire na-aga nke ọma n'ime ụlọ tọgbọ chakoo. Naanị ihe tọgbọ chakoo ebe niile, ihe kwesiri ịdị. Ebe enweghi ihe, ịgaghị ahụ ihe ọ bụla, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnweghị anya. Mana a hụrụ m egwu ahụ amaghị m ihe kpatara nke a.
Oghere na-egosi oghere enweghị oge. Ogba enweghị ihe dị na ya. Oghere na-abụkarị njem na-abanye ma na-apụ. Mgbe ụfọdụ nlele na-apụ site na oghere ma nlele na-esite n'ime oghere ahụ. Ulo na-agu mmiri, ha ga-achọ ka ejupụtasị ha. Afọ ojuju nke ihe nile dị adị. Eziokwu nwere oghere. Ihe ndị a pụtara ìhè nke na onweghị onye ga-ahụ ha, ọbụnadị onye na-ahụ maka ọmụmụ ihe na nnukwu ngwaọrụ ya. Enweghị uwe nwere ike ịhụ na ndị gba ọtọ. Enweghị oghere, n'aka nke ọzọ, ka agụụ na-agụ ya. Elu ala na-atọgbọ chakoo. Ọ bụrụ n ’nzuzu a jupụtara, ala ahụ na-apụ n’anya ngwa ngwa, ọ ga-adịrị gịrịgịrị. The esthete depụtara ụcha n’elu elu ka o wee nwekwuo ntụkwasị obi.
Anụmanụ oge ochie nwere ụkwụ anọ, ọ "meows" ma ọ bụ ahịhịa. Okwu anumanu a bu udiri anumanu nke otutu mmadu noo n’enweghi ihe jikotara ha. Anụmanụ anaghị ebu akwụkwọ, ha enweghị ike ịme bọmbụ atọm. Anumanu bu ndi azu azu. Agbanyeghị, otu ụbọchị ụmụ anụmanụ ga-aghọta usoro iwu ezughị ezu nke Chineke. - Ma, olee mgbe?
Nature nwere ike nke ndu. E nwekwara ọdịdị nke ndị rọrọ nrọ: ọdịdị a bụ paradaịs nke ndị mmadụ tupu ọdịda. Ọdịdị nke German German Charles Darwin yiri nke a: ọgụ nke ndị siri ike megide onye siri ike karị. Ọdịdị anyị nke abụọ bụ ọdịbendị. A na-akpọ ọchịchị ala anyị nke atọ. Ọ dịghị onye nwere mmasị ibi na ya.
A na-eji ike ala ọzọ si Sweden mee ice kpụ ọkụ n'ọnụ. Ike a na -aga n’ụwa n'ụdị agadi nwanyị aha ya bụ Eisblume. Okooko osisi mere na ice, ezigbo ifuru. Okooko osisi na-echetara oge opupu ihe ubi, n'ihi na n'oge a, okooko osisi dị ọhụrụ na-eto oge ntoju na-eto eto. Agbanyeghị, ifuru ice anyị na-agba n'anwụ n'oge oyi. Ndi mmadu ndi ozo nile nke ejiri me ice mejuputara site na ifuru ice. Agnis sikwa na oyi, site na ice na-enwu enwu. Agnis na-ahụ ifuru ice ma na-enwe obi ụtọ. Ọgbọ agha bụ ebe kachasị ekpo ọkụ. Maazị Sumpfstein bụ ihe na-adọrọ adọrọ dịka onye na-ere ice cream. Bọọlụ ice ya nwere ihe mgbawa, na-amụnye mgbe ọ dịgoro n’elu ugwu niile. Eisblume hụrụ Maazị Sumpfstein: ọ tụrụ ụjọ,bọl bọọlụ na-atụgharị n’isi ya. Onweghi onye ma na bọọlụ ahụ ga-abịa na steetị n'ime ogige nke iri na asaa. Na Agnis ọ ga-abụ atọ. Bọọlụ Ice ma ọ bụ bọọlụ bọọlụ, bọọlụ bụ otu. Bullet bụ ajọ akụ nke akara aka. Ma ugbu a, anyị na-akụba n'ụlọ akụ a wee mepụta ara ahụ. Onye ọ bụla na-eme nzuzu: Eisblume, Agnis na Herr Sumpfstein nọ n'otu igbe. I kuo ume nzuzu: Ah, nke ahu di nma. N'ikpeazụ ha enwerela onwe ha!Agnis na Mr. Sumpfstein nọ n'otu igbe. I kuo ume nzuzu: Ah, nke ahu di nma. N'ikpeazụ ha enwerela onwe ha!Agnis na Mr. Sumpfstein nọ n'otu igbe. I kuo ume nzuzu: Ah, nke ahu di nma. N'ikpeazụ ha enwerela onwe ha!
Ọbara na-agba n’ime dị ka nnukwu okpomoku ma sie ike. Ọbara mmadụ nwere nke onwe ya ọ bụrụhaala na ọ ka gbasiri ike na akwara ya. Ọbara ọbara, ya mere ọ dị okirikiri. Ike ọbara na gburugburu ya. Ọbara ọbara nke dị n’ịgwọ ọrịa dọkịta na-enweghị obi nwụrụ anwụ anwụworị. Naanị ihe nākpu akpu na-agba mmiri oyi. Ọ gwụla ma anyanwụ na-enwu na ajị anụ ahụ na-acha odo odo. Vampire ọ bụla maara: Mgbe ọnwa na-enwu, ọbara dị oji. Ọ dịghị ihe ị na-ahụ n'ehihie.
Ọkụ na-agba egwu dị egwu. Ọkụ ọkụ na-emebi ogologo mmanụ. Okpomọkụ dị ọkụ n'ime ụlọ ahụ, ezé azụ na-ata onwe ha ike nke ike na-acha ọbara ọbara na-eme ka ihe gbara ya gburugburu dị ọkụ. Ọkụ oku na-egbu ntụ. Ọkụ na-atọ ụtọ, mana ọ na-enweta mmanụ n’ọkụ. A na-eri nri ya ngwa ngwa karịa ka esi esi ya, ngwa ngwa. Ọkụ anwụ na-ehi ụra na-efe efe na mbara anwụ adịghị anwụ anwụ. Mgbe okpomoku kpara nkụ, ọ na-aghọ okpomoku.
Ihe izugbe na-egosi ihu ọ bụla dị mkpa. Pụrụ iche na-egosi ihe dokwuru anya. Ohaneze bụ otu ihe n’ebe niile, a na-egosikarị ya site na otu. Na odida obodo ihe nile, enwere ike ichota onye obula. A na-akpọ nwanne nwoke isi awọ n'ozuzu. Ohaneze gharịrị imeghari ndị pụrụ iche ugboro ugboro, nke na-eweta nrụgide. Ohaneze na-enye nchekwa mgbe ị na-ezumike ezumike pụrụ iche.
Onyunyo na-adịgide adịgide ga-akwụsị mgbe niile, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ịga ebe ọ bụla ọ chọrọ. Ọ bụrụ na ndò guzoro chọrọ ịkwaga, gburugburu ebe obibi na-agafere ya karịa ya, ya onwe ya na-akwụsị. Onyunyo guzo nwere ike ịgagharị ma ka ga-anọ n'otu ebe ruo mgbe ebighi ebi. Onyunyo na-eguzo ọtọ enweghị ụlọ ọrụ. N'ezie enwere ndò ndị ọzọ guzoro, mana ha nọ ebe ọzọ.
Circuit dị mkpirikpi
Pathzọ ahụ na-eduga n’inweta ihe mgbaru ọsọ ọ bụrụhaala na ọ dịghị eso eso na-aga ije na ya. Circuit dị mkpirikpi na-emechi ụzọ nke ndụ. Ọ na-agbaso ije ọsọ ọsọ na-adịghị. N'ihi nke a, o nweghi ahumihe. Ọganiihu ya dị ọkụ ma tọgbọ chakoo ma n’enweghị anụ, mana sekit dị mkpirikpi nwere mmetụta charismatic. Zọ nke dịkarịsịrị nso na-abụkarị nke dị mkpụmkpụ, ebumnuche ya bụ adịghị adị. Ihe dị mkpirikpi na-eme na-enweghị uto, ọ na-aga n'okporo ụzọ. Joachim Ernst Berendt dere akwụkwọ: '' nozọ adịghị, naanị gaa: Buru ọdịdị ''. Ka ọ na-aga n’ihu akwụkwọ ya, ụgbọ ala kụrụ ya.
Na-atụ ụjọ na ịga ije nwere ike ịdafe. Ma ije ije nwere ya mma: ọ na-adịgide na-abawanye. Guzo guzoro na-abanye na corridor. Ma, ịgha ụgha adịghị agba ọsọ.
Ugwu elu ugwu enweghị nsogbu ma nwee obi ụtọ na ha buru oke ibu. Eluigwe na-enwe a happyụrị mgbe ọ na-anabata ndị ọbịa site n’ugwu. Ihu igwe kwesiri ekwesi.
Ihe kpatara ya n’okpuru. Ọ bụ ntọala, ala, idebe na izi ezi. Ọ bụrụ n’ilee anya n’ime ala, ọ ga-abụ abis. Gaghị ahụ ike ndọli ebe ahụ. Bott na abis na-akwụsị irighiri akwara dị ukwuu. Ọrụ kachasị mma maka ụmụ mmadụ bụ ịbanye n'akụkụ nke ihe. Naanị oke bekee ụjọ na-ahọrọ ime ihe bara uru, n'ihi na ụwa na-ala n'iyi n'ụzọ bara uru.
Ọnọdụ ala ahụ dị n'okpuru ụwa. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ nke ụwa, ị maghị ya, ọ bụ ya mere na ọ naghị adịrị gị mma. Ndi nwuru anwu dina n’ala, e nwekwara ebe omumu di. Kedu ụzọ ọzọ osisi niile kwesịrị isi too?
Igwe ojii ahụ bụ atụrụ n’eluigwe. Igwe ojii na-ewute oge niile. Ha na-aghakarị ákwá. Mana ha na - echebe ehi ka anwụ ghara ịlụ ya. Igwe-oji kpuchie ezi mmadu na ihe ojo. Nwere ike ịkọwa n'ụdị ha ihe awa ahụ kụrụ. Igwe na igwe mmiri na agba egwu.
Ikwesighi itinye unyi na salad. Ma ọ bụghị ya, ọrịa na-eyi egwu! Unyi putara ihe nmebi iwu. Enwere ike iwepụta ọnya dị ka mmetọ, n'ihi na ọnya ahụ na-etolite nnukwu achicha n'akụkụ ọnụ nke yiri ka ọ bụ unyi. Mmetọ ma ọ bụ mmerụ ahụ na-egosi ikpe ọmụma. Ọ nwere onye Nke a wutere anyị n’ihi na anyị ezughị okè. Ka ànyị ezughị okè n’ihi na e merụrụ anyị ahụ́? Ka ikpe mara anyị maka emebi ihe, iwu ka ọ bụ mmadụ? Ma anyị anaghị afụ ụfụ! Anyị zuru oke na enweghị ntụpọ! Onye ọ bụla nke na-ekwu ihe dị ka nke a na-ewute ya, yabụ na-ama ya ikpe.
Mmekọahụ n'ụlọ nga
Mgbidi ụlọ mkpọrọ ahụ bụ obi. Mgbidi ya dị oji dị n ’ime na-acha ọbara ọbara n’elu n’ime. Onye mkpọrọ ahụ bụ Rasputin abụghịzi nke ọdụdụ, kamakwa ọ bụ nke okenye, n'ihi na mgbe niile ọ ka nwere ajị anụ. A tụkwara Germania mkpọrọ: Rasputin na Germania na-edina ụra. Rasputin na-atụ egwu na Germania ga-ebute oria afọ. Germania hapụ Rasputin. Eleghị anya ọ ga - eme Pippi nwa obere oge, mana ọ gaghị aga ebe dị anya n'ihi na anyị nọ n'ụlọ mkpọrọ nke obi. Prisonlọ mkpọrọ bụ ụlọ ị na-agaghị agbanahụ. Rasputin guzoro n’ihu enyo ahụ ma gosipụta ọtụ ya. Ọkpụ na-efesa na aka ọcha ọcha: ihe arụ kpamkpam.
Oke na bọmbụ atọm
Oke dị ka ụmụ oke na -aghọ megalomaniac. Ha kacha anabata redioakia n'ihe niile dị ndụ. N’ezie otu ụbọchị ha ga-abụ ndị eze nke ụwa. Oke oke na-egbu onwe ha, ha yiri ndi mmadu. Oke onye nwere ike! Agbanyeghị, oke nwere amamihe karịa ụmụ mmadụ, n'ihi na ha na-amụta ngwa ngwa ịghara iri nri na-egbu egbu ma ọ bụrụ na ha achọpụta na ndị ọgbọ ha na-ewere ya. Ọ bụ ya mere nsi abụghị ihe ga-adịgide adịgide iji kpochapụ ihe ndị ae kere eke. N'oge emepe emepe, ejiri jiri oke meekpa ndị mmadụ ahụhụ; taa, a na-ata ahụhụ oke n'ụlọ nyocha sayensị. Ọ bụ mmeri maka ihe a kpọrọ mmadụ! Site n'aka onye arụrụala! A na-elekọta oke ma mara mma na inlọ Nsọ Karni Mata nke India. N’Ebe Ọdịda Anyanwụ, agbanyeghị, enwere naanị oke ọwa mmiri adịghị.Na China, oke nwere ọbụna dịka akara zodiac. Mana Psychosaurus nke nje izizi na-ekwu, sị: “Anyị anaghịzi ebi n’etiti ndị ọgbọ ụwa! Wepụ mkpari ọrịa na-ebu! Kedu ihe kpatara na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anaghị eme ihe ọ bụla? Ha anaghị eme ihe ọ bụla! "
Nweghị ike imetụ kink n'ihi na ọ dị anya site na agba nke ọ na-agba. Ọ bụrụ na onweghị ihe mebiri emebi, enwere ihe. Otu ahịrị na-esikwa ebe a gaa ebe a. Ọ bụ ihe nkịtị na - eme ka ị daa mbà. Ndị ọkà mmụta sayensị na ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ dị ka ahịrị. Oku anaghị eri ndụ. Igwe ahụ kwụsịrị ike ma nweta ume site na ya ka ọ nwee ike kpoo ụlọ ahụ ruo ogo 20.
Ugwu ahụ bụ mkpọda nke na-asọda dị ka ugwu si ewu ewu, na-echigharịkwute nke kwekọrọ na mkpọda mkpọda ahụ. Tdị ụgbọ mmiri ahụ abụghị nke aka ike, mana ọ dabara na ịhụnanya nke ndị nwere mmasị.
Osisi na-amị mkpụrụ n’afọ niile. Ejiri ọbara siri ike mee osisi ya; akwụkwọ ya nwere ike ịchị ọchị. Colorfulcha mara mma dị mma, isi awọ adịghị mma. Ekwensu riri ndi oma. Ihe ọma nwere ike iso na ya. Ihe ọjọ, dabere na ibibi ezi. Yabụ, ajọ ihe agaghị emeri.
Nnu nwere sodium na chlorine. Ingkwụ dị n'ụkwụ gị abụọ, mana ịdị adị chọrọ ihe dịka ala. Dị adị chọrọ akụkụ nke ihe mejupụtara ya, ọ nweghị ike ịbụ naanị ya Kachasị dị adị. Okwu ahụ "ngwaahịa" dị nso na nke ihe.
Useké na bat
Icemụ nwere anọ ụkwụ ma na-agba ọsọ otú Chineke. Agbanyeghị, ụfọdụ ụmụ oke eleghara ebe ha na-aga ma fụọ. Ha na-amịpụ umengwụ ụbọchị niile (isi ala) ma rie oriri abalị (na-a bloodụ ọbara na ihe). Oke dị ka bat ahụ kpuo ìsì. Nke ahụ bụ ntaramahụhụ Chineke maka mmehie ha. Dịka ụzọ isi dozie nsogbu, ụmụ oke na-efe efe ga-ejizi ntị ha. Ọ na-enwu ọkụ kpamkpam.
Womenmụ nwanyị ndị dị obere na-anọdụ ala ngwa ngwa n'ọdụ ụgbọ mmiri anorexia. Ebubo nke ibe na-agagharị na abụba. Ọ bụrụ n ’ọchichị chọrọ inweta ibu, yabụ kpọọ onwe ya“ sirọ ”. Onye dị gịrịgịrị na-enwe mmetụta siri ike mgbe ụfọdụ karịa nke siri ike n'ihi na ọ nwere ike ijigide ọtụtụ ihe dị na akwara ya dị ụtọ. Ya mere, dị gịrịgịrị na-enwekarị nghọta karịa oke. Nke a emetụtaghị mbadamba bọọdụ dị mkpa, n'ihi na ha nwere bọọdụ dị n'ihu ha.
Mmeri nke Pyrrhic
Aha m bụ Schmidt ma anwụọla m, ebi ndụ na-ezighi ezi. N'ebe m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Setan & smụ Sons, onye isi m nke anyaukwu ghọrọ ederede 100 euro. Aghọtara m ohere m ga-eji na-enwe ndụ obi ụtọ mgbe ọ nwụsịrị: m tinyere ngwa ngwa akpa akụ na obere akpa m ma tee ya obe na akpụkpọ anụ ya. E jidere onye isi m. Naanị mgbe m mesiri ya obi ike na agaghị m aga hel ma m nwụọ ka m wepụrụ obe ọzọ. N'oge na-adịghị anya ka nke ahụ gasịrị, adara m na peel banana n'ihu AOK wee daa n'azụ isi m wụdara n'okporo ụzọ ahụ siri ike. Anwuola m ozugbo emere m nkwa na aga m aga hel, ma ha achoghi ikwe ka m banye n’eluigwe ebe obu na m meriri ihe ojoo,ma emeghi ezi ihe. Ugbu a, m na-aga azụ mgbe niile n'etiti eluigwe na hel na amaghị m ihe m ga-eme.
Fred: Ahụhụ zuru oke. Kedu onye arụrụala nke kere ụwa?
Detlef: Ahụhụ na-echebe mmadụ ime ihe arụ. Ọ na - egbochi gị ị drinkingụ nnukwu biya. Ihe ọjọ n’eweta ezi ihe.
Fred: Ọ́ bụghị ụzọ ọzọ? Lovingdị ịhụnanya?
Pope: Chineke anaghị agha agha (dịka m), ọ ga-ama ihe kpatara o jiri kee ụwa.
Mephisto: Abụ m akụkụ nke ike ahụ nke na-achọ ihe ọjọọ mgbe niile ma na-emepụta ihe ọma.
Bert Hellinger: Na ọkwa dị elu, ihe ọjọọ dịkwa mma.
Fred: M bi n’ụwa; ụwa bụ ọkwa dị ala, ọkwa dị elu abaghị uru ọ bụla nye m. Ihe ndị a niile anaghị ekwe anyị kwenye.
Detlef: Chi nke anyanwụ nwetakwara ahụhụ. Ọ nwụrụ n’elu obe dịka mmadụ ma bilitekwa n’ụbọchị nke atọ.
Fred: Nke ahụ bụ na ya na ịdị n'otu. Ahụ adịla m mma ugbua.
Chukwu kariri… Chineke kariri mgbe mmadu nile puru iche. Maka nchekwa, achọghị m ide ihe ọjọọ gbasara Chineke, ị maghị. Ma oburu na Chineke bu ekwensu. Chi ndị bụ chi ọjọọ ha bụ? Ka ịdị adị ha ọ̀ na-eri nri dị mma? Ọ bụrụ na enwere naanị otu Chukwu, mmadụ ga - akpọ naanị ya Allah. Agbachapụ iche na ihe niile nwere ụda A na-ada ụda L na-enweghị njedebe. Ọ bụrụ na enwere chi dị iche iche, mgbe ahụ ọ na-achawanye agba ma na-ahụ n'anya ma nweekwa nghọta karịa maka ụmụ mmadụ. Chi ọbụla n'etiti chi ndị ọzọ nwere oke ọrụ ha. Ọ dịghị mkpa ka Allah nwee aha 99 n'ihi na enwere chi 99. Na chi narị ga-ejikọ chi niile ọzọ, yabụ otu na-eche.Mbibi nke ime ezi ihe na ihe ojo ghachapu n'ime otutu chi. Mgbe ụfọdụ a na-akpọkwa chi dị ka mmụọ ozi, ndị mmụọ ozi ma ọ bụ ndị kacha elu.
Garlic bụ freshness stale. Mkpịsị aka ya gbajiri agbaji. Ezigbo ndị mmadụ na-akpata nkewa nwere mgbọrọgwụ. Na mpụga, na-agbanyeghị, yabasị na-egosipụta okike. Garlic na-enyere aka megide vampires na ndị amoosu. Nnukwu ahụ na-eme ka ọbara sie ike ma na-eme ka ọ ghara ịdị ike ka nje ndị ọzọ nke na ọbụna vampires na-agụ agụụ. Ọkpụkpọ schizophrenic na-egbu nje ndị ọzọ dị ka teepu ma ọ bụ nje bacteria na-akpata ọrịa. Garlic na-agbasa ihe a kpọrọ mmadụ dị ka anwụrụ ọkụ sịga. Likefọdụ na-enwe mmasị na ya: ndị a bụ ezigbo mmadụ. Agbanyeghị, ndị ọjọọ (ya bụ, vampires, ndị amoosu, ndị Nazi, ndị na-ahụ ụmụaka, ndị isi ike na ndị na-eme ntuli aka elu) na-enwe mmetụta na-amapụ ya.
Soro ekwensu kwurita okwu
Can nwere ike bụrụ otu n’ime ndị bara ọgaranya ma mara mma ngwa ngwa site na ịdebanye obere nkwekọrịta na ụlọ ọrụ ọrụ nke Setan & Söhne: onye ọrụ ngo (Teufel) na-emezu ọchịchọ ụwa niile. Na nkwughachi, onye ọrụ ngo nyefere mkpụrụ obi mmụọ nke ndụ nwụrụ anwụ ka ọ nwụọ maka ebumnuche nyocha. Nkwekọrịta ahụ nwere ọrụ dị mma n'iwu site na mwepu ọbara n'aka onye ọrụ ya.
Arnold na-eche echiche banyere ọrịa na-efe efe ga-abịakwasị ụwa ma gbuo ndị ajọ mmadụ niile. Ndị ezigbo mmadụ anaghị arịa ọrịa ma ọ bụ lanarị ọrịa ahụ. Arnold bụ n'ezie otu n'ime ezigbo ụmụ mmadụ. Olee otú ọ ga-esi jide n'aka na nke ahụ bụ? Kedu maka ma ọ bụrụ na ọrịa ahụ gburu naanị ndị ezigbo mmadụ? Nke ahụ ga - apụta, mana nke ajọ ikpe nke ụwa a. Nojọ jidere Arnold ma chọọ inweta ọgwụ mgbochi maka akara aka, n'agbanyeghị na ọ maara na nke a agaghị ekwe omume.
Nzube na-ewepụ ịbụ ihe. Chapu mara mma karịa ọnụnọ, nke mere na anwụnta anaghị enwe aha dị elu. Mkpụrụ obi siri ike nwere obi ike iji nwee obi ike, ụjọ anaghị enwe isi ọ bụla. Ikwesighi ebipu aka gi! Yabụ na folks: kpachara anya! A na-akpọ ụcha nke ncha. Ose na-ekpo ọkụ na bọmbụ mmekọahụ na-enwe oge ụfọdụ nwere ike ịbụ obere ihe na-ekpo ọkụ.
Ogwe aka gbatịrị. Aka na-amalite ito ruo n’aka. Ngwurugwu na-emegharị aka, a na-eme ka aka sie ike na ngwá ọrụ. Alaka bụ ogwe aka nke osisi.
Ókè na-ekewapụ onwe ya na ibe ya. Ọ na-amalite na oke ma ọ bụ na-akwụsị. The ókè-ala ghọrọ arịa maka ndụ. Ọbara chọrọ veins dị ndụ. Ulo na-ebi n’iru mgbidi ya. Mgbe obibi na-apụ n'ụlọ ya, mmiri riri ya n'oké osimiri nke enweghị ebe obibi.
Afere ahụ nwere akụkụ dị okirikiri. N’adịghị ka etiti ahụ, nsọtụ ahụ tozuru uto nke onye nwe ya. Etu bụ ọla, ọ bụ iwu ka ọ kwụsị usọrọ.
Ejiri okwua “ụwa” kọwaa odida obodo ihe niile. Enwere ike ịghọta ụwa dị ka nnukwu igbu ọchụ. Worldwa a enweghị njedebe. Anya mmadụ enweghị ike ịchọta nkwụsị n'okporo ụzọ na-adịghị agwụ agwụ. A na-emechi ụwa dị nchebe na nsọtụ ya. N'ebe ahụ, ụwa nke dị nchebe na-ejikọ aka na ịdị ọcha.
dị oji na ọchịchịrị
Gustav kpuru ìsì na corns abụọ ahụ. Hiskwụ ya enweghị ike ịhụ ihe ọ bụla. Nke ahụ bụ ihe dị mma, maka na ọ bụrụ na ịhụghị ihe ọ bụla, ị gaghị enwe nkụda mmụọ. N'ihi ya, Gustav nwere obi ụtọ. Enwere ndị mmadụ nwere ụbọchị ha kpuru ìsì. Blind kpuo ìsì karịa. Umu oke na-ahụ oji, ma ha na-anụ ka nke ọma. Ọchịchịrị na-ahụ ìhè?
Ọnwa na-achị ọchị n’ọchịchịrị. Enwere ike ịhụ ya nke ọma. Dika onwa zuru oke, obu nwoke. Ma ọ bụghị ya, ọ bụ nwanyị. Ka ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu? Ọnwa na-ama egwu n’eluigwe. Ọ chọghị ka a hụ ya; Naanị ọnwa, ụsụ na ugoloọma ka a na-ekwe ka ha mee nke ahụ. Ọnwa na-enwu gbaa mgbe ndị ezigbo mmadụ hie ụra.
Onwere otu oge ma o buru otu mgbe. Naanị oge bụ obere oge. Ọtụtụ n'ime "oge" enweghị uche. Yabụ na enweghị oge. Ma elekere ahụ na-egbu. Ọ bụ ya mere nche ji bụrụ ndị ụgha.
Ndị mmadụ enweghị ike icheta ma ọlị. Any naah see ihe nd past garaaga n moment ugbu a. Kwa ụbọchị ị na-echeta ihe dị iche iche gara aga. Iszọ ọ bụbu ụzọ furu ụzọ.
Na mbido, mmiri ara ehi dị. Ejiri mmiri ara ehi kee ụwa nile, ọ bụ ya mere anyị ji na-ekwu maka Milky Way. Mmiri ara ehi ahụ sitere na Urkuh, nnukwu MUU.
The freshness na-abụ abụ dị ka ọkụ na mmiri nke ndụ. Anụ ọhụrụ dị mma karịa anụ ezi. Ihe ọ juiceụruitụ mkpụrụ osisi dị mma karịa ọbara, n'ihi na anụmanụ na-eregharị n'anya ya.
Ibe bụ nsị nke ochie. Ha sitere na mgbe enweghi mgbe ọ bụla. Okwu ha dịkwa iche. Ọ dịghị nke obere pere mpe, mana plọg milder ka ihe siri ike na-agagharị n’ahịrị site na ebe a ruo ebe ahụ. Ata ata isọn̄ idikpaha.
Ifufe na-efegharị na nzuzo na mkpọmkpọ ebe nke mkpọda ụlọ elu. Mgbidi gbara ọchịchịrị bụ ihe omume. Ọgba ụnyaahụ ụnyaahụ, akụrụngwa taa. Oke òké nwere ike dee ma gwa ya akụkọ banyere mbibi ndị nwụrụ anwụ. Nnụnụ na-efegharị mgbede anyanwụ na-acha ọbara ọbara ma ghara ịnọkwa ebe ọ bụla.
Ihe mbụ ahụ na-ebu ụzọ abịa. Ihe na-akpata ya, mmalite, ofe ihe mgbe ochie, Uranus, anụ ndị nke anụmanụ, nna nna ha, oke ọhịa, Nnukwu Bang, na n'ezie akwụkwọ na ike nne na nna ochie. Nke ikpeazụ amabeghị okwu a dị ize ndụ. Na Vienna, ihe dị egwu pụtara ihe dị oke egwu.
Iswa dị larịị! Y’oburu na ala uwa, ndi New Zealand gha adikwa n’elu uwa. NASA, kwesiri inara ogwe aka ya di elu? Ha amagbuola ikuku ọnwa!
Ihe nmalite nwere ike ibido na mberede dika ogwugwu ma obu iguzo dika uto na udu mmiri. A na-amụ mkpụrụ ahịhịa na ụmụ ọhụrụ na-amụ ọgwụ nje n'efu n'ụlọ ọgwụ. Mmalite na-achọ nkwụsị: ọmụmụ nwa na-akwụsị ime ya. Mmalite amabeghị onwe ya: ọ bụ naanị na njedebe ka mmalite na-amata onye ọ bụ.
Eatmụaka na-eri chọkọletị ụmụaka. Ndị okenye na-eri chọkọleti okenye. Ngwaahịa abụọ na-atọ ụtọ dị ka chọkọleti. Can pụrụ ịhụ: ụmụaka abụghị ihe pụrụ iche. Ha bụ ndị riri chocolate dị ka mụ onwe m. Don'tmụaka ekwesighi ka a na-enye ha mmiri, ọ bụ ezie na ha na-aga ụlọ akwụkwọ ọta akara.
Akwụkwọ toadstool hụrụ nnwere onwe ya n'anya. Mmiri si n’elu chọ ya. Mana ero uhie juru inu ajuju nke Chukwu. Agdị agaric ga-achọ idobe ihe ọ bụla. Ọ bụdị onye nwe ụtarị. Ọchị dị mkpa na ya. Mmiri na-ezo na ujo ofufe. Asịrị ahụrụ, na enwere ihe ndị ọzọ karịa achị, mana agaric anwaghị imeghe onwe ya. Ọ na - eme ya, n'ihi na ọ nwere obi ike. Egwu si n’elu n’elu gbadata n’ime ero. Hey nke a. Ọ bụ ugbu a abụghị toadstool, kama ọ bụ ntakịrị òké, onye chọrọ ibi ndụ klas nke etiti n'ọgba ya. Mana nke a anaghị arụ ọrụ. Mụrụ ahụ na-amụ nkà ihe ọmụma ma na-eme ụwa ọhụrụ ma bụrụ onye ama ama.
Martin Luther na Paul na-egbu maramara. Ngwa ngwa, ọkụ, ha ghọrọ ndị mmadụ mmụta. Àmụ̀mà àmụ̀mà àkwalitekwuru anyị? Ma ọ bụ oriọna bụ naanị sekit dị mkpirikpi na-eke ihu abụọ? Would ga - anwale nke ahụ n'oge oke mmiri ozuzo na - esote.
JF Kennedy na Bielefeld
Otu mgbagha a na-ebo ebubo na-ekwu na obodo Bielefeld adịghịdị adị. Site na oge ụfọdụ, ọ nweghịzi ike ịnweta ndò iji kpuchie ndị na-adịghị adị na Bielefeld. Ọ bụ ya mere ha ji chọsie ike igosipụta nkekọ a dị ka akụkọ efu ma ọ bụ ihe egwuregwu ka onye ọ bụla ghara inweta echiche ahụ nke adịgboroja nke Bielefeld bụ eziokwu ahụ adịghị. Ọ dabara nke ọma, enwere Bill. Na July 24, 1963, Bill Clinton letara Onye isi ala America John F. Kennedy na White House wee maa aka ya. Clinton ji mkpu sị, "A ga m abụ onye isi ala!" Site na omume anwansi a, Clinton zuuru akara ya na onye isi ala Kennedy n'oge ahụ. Nsonaazụ: Kennedy nwụrụ. Ma ọ bụ kama anya ya.Ezigbo Kennedy ahụ jụrụ oyi. Mgbe adịgboroja nke Bielefeld yiri iyi na a ga-enwete, Kenan nwere akpụ akpụ ọzọ. Mgbe a rụchara ọrụ ịchọ mma na ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ na German, Kennedy taa bụ onye aha ụgha Pit Clausen onyeisi obodo nke onyinyo obodo Bielefeld.
Sindbart: Hey gị, ahụrụ m gị!
Windbart: Oke ara! Mụnwa gị. O bu ihe itunanya mgbe ichoro na anyi abuo adighi.
Sindbart: Mgbe mmadụ abụọ na-ezute na-adịghịdị, ha na-adị adị n'ezie na ibe ha na maka onwe ha, n'ihi na ha abụọ na-ezukọta n'otu ọkwa, ya bụ ọkwa adịghị adị.
Windbart: rarely na-ezutekarị onye ọ bụla. I ghaghi idi ezigbo. Anyị kwesịrị iji ohere ahụ nwee mkparịta ụka zuru ezu banyere aghụghọ na eziokwu.
Sindbart: Nnukwu, m nọ ebe ahụ.
Osimiri nwere ike ikwe ka onwe ya dị ukwuu n’ihi na ọ na-edebe ihe nzuzo. Osimiri mejuputara osimiri ahu (anya mmiri nwere nnu). Osimiri bụ nri maka ụwa. Akpịrị ịkpọ nkụ nke ọzara akpọnwụwo kemgbe, ọzara adịghịzi mkpa ịdị ndụ.
Arnold Heitermann adịghị ahụ telivishọn ma ọ dịghị agụ akwụkwọ akụkọ. Naanị isi okwu. Maka Otto Nkịtị, ihe dị ugbu a dị mkpa, ihe ọ bụla ọzọ adịghị mkpa. Arnold nwere mmasị na foto buru ibu, ọ bụghị n'ihe ndị juru. Na mgbakwunye, ị maghị ma ozi ziri ezi. Ọ bụrụ n’okwu kwesịrị ikwu, sị: “Echi ụwa ga-agbada!”, Maazi Heitermann ga-agụrịrị ozi ahụ. Dobọchị ikpe dị otú ahụ nwere ike imetụta gị n'ezie, naanị maka onwe gị.
Mmiri nwere mmasị ịkwaga. Ọ bụrụ na uwa kwere ya, mgbe ahụ ọ ga-asọ. Mmiri dị ọhụrụ ma bụrụ abụ n’onwe ya. Ìhè na-efegharị site na mmegharị nke ebili mmiri ya. Mmiri dị ebe niile dị ndụ. Mmiri adịghị n’apịtị ma ọ bụrụhaala na ọ dịbeghị n’ala. Mmiri ahụ gbara mmiri, mmiri ahụ adịghị asọpụta.
Ikwesighi ịbụ frog, ọ bụghị ụjọ frog. Onye obula ewurula nso na mmiri dika frog bi n’ime nkpuru obi. Mkpụrụ obi na ọdọ mmiri bụ otu mmiri, azụ na frog maara nke ahụ. Gaghị atụ egwu mmiri, ọ bụ naanị anụmanụ na - ata nkụ nwere ike. Jụọ oke bekee ahụ egwu! Ọ bụghị ụjọ frog! Frogs anaghị apụ apụ. Anụ ahụ bụ azụ mereghị anụmanụ anụmanụ: ọdịda nke mmalite. Azụ abụghịzi azụ, mana ezughịkwa enwe enwe. Frogs ka na-acha akwụkwọ ndụ n'azụ ntị, ọ bụghị naanị ebe ahụ. A na-enwekarị frogs, ma, a na-akpọ ha toads.
Anụ ọhịa na-ama ama n’elu ụlọ nke ụlọ dị na Rom. Pigszì ezì ọhịa kụrụ azụ ha na pavu n'okpuru. Bonyịnya ọhịa emebibeghị ihe ọ bụla, ọ na-a gụbiga mmanya ókè ma na-adịgide. Bodị oke ọhịa a siri ike n'ezie. Ọbara gị agaghị akpọnwụ. Na ọgbụgba siri ike, ihe ọ juiceụ pulụ ha na-ere ọkụ na-adọta oge mgbe niile.
Mmetụta enweghị ụcha. Ha bụ egbe mkpọsa na-ekwesịghị ntụkwasị obi, naanị ihe ha nwere bụ ezughị okè. Ga-ewepụ obi gị na mmetụta? Mmetụta dị mma maka ịba ụba na oke, ha na-agbasi ike ma na-esighi ike, ha na-alaghachite na-enweghị nchịkwa dịka ịnyịnya na carousel.
Na obosara nke ụwa na-emikpu n'ime omimi. Ihe niile na-ehi ụra na ọnwa nọ na mbara igwe. Ìhè ọla ọcha ya na-abanye na mbibi. Otu aka chọrọ ijide ọnwa ma meekwa ya: Ọ gbajiri ọnwa. Ọla ọcha, nke na-eji oji, na-agbada na mpaghara dị otu ọnwa. Tremwa mara jijiji.
Ọnwụ gọnarị ndụ ma mee ka o dozie ya. Gini kwesiri ka ugo biri n’elu ya? Kedu ihe ọ kwesịrị ime na azụ? Ọ ga - ebi ndụ site na igbu anụmanụ ndị ọzọ. Dị ka mmadụ! Ndi anaghị eri anụ bụ ezigbo mmadụ. Ma ha onwe ha aghaghi iso oku nke okike. E kwuwerị, osisi bụkwa ihe dị ndụ. Ndi anaghị eri anụ nwere vitamin. Ha dị ọcha na-eme ka ha na-acha ọcha ihu, ha bụ biovampires. Ndị anaghị eri anụ na-a theụ ọbara nke omume. Onye riri ibe ya bụ ụmụ mmadụ.
Onye na-ele televishọn nwụrụ anwụ
Igwe televishọn dị, ma ọ nwere ọkpụkpụ dị n'ihu ya. Ọkpụkpụ nku ya nke efu efu amaghị ihe mmemme ahụ. Mmadu gbanyụọ igwe onyonyo: Ọkpụkpụ nwoke ahụ matara na ọ na-efu ihe ma na-ewe iwe. Naanị na nkwụpụ ka ọnwụ ghọtara na ọ nwụọla.
nzube nke ndu
Ebumnuche nke ndụ bụ inye nnukwu onye akụ na ụba ọrụ ugbo. N'ọnọdụ ọ bụla, nke ahụ bụ echiche Dr. Lightbrain. O kwenyere na ihe ndị a: site na mbara igwe dị anya, onye ọka mmụta akụ na ụba na-agha mkpụrụ nke mkpụrụ obi anyị n'ime ala nke inweta. Site na ahụmịhe nke ndụ, nje na-eto n'ime mkpụrụ nke mkpụrụ obi. Nnukwu onye ọka mmụta akụ na ụba kụrụ ihe na iwere ntị a mgbe anyị nwụsịrị. Dr. Brainlight bụ ejima Dr. Lightbrain. Kwa ụtụtụ Dr. Brainlight tụpụrụ ọka muesli niile ọka mgbe ọ chere echiche aghụghọ nke nwanne ya nwoke.
Anyanwụ bụ obi nke ụwa, enwere oghere n'ime ya karịa na mbara igwe. O nwere nnukwu ukwu na-egbu maramara. Anyanwụ na-amụ ụwa. Anyanwụ riri ụwa. Ha abụọ dokwara. Anyanwụ bụ ihe niile. Ọ dị ọcha na ndị agadi, ọ nwere odo na agba odo. Anyanwụ enweghị ihu ihu.
A vampire na-ele onwe ya na enyo ahụ: nwoke nwere ntutu ojii na iko na-apụta nke ọla ọcha, ọ nwere ihu na-acha odo odo. Vampire na-eche na ọ dị ka onye nkịtị na enyo ahụ. Unad ahụ na-amata onwe ya na enyo, mgbe ọ na-ele anya na aka ya na ahụ ya, ọ hụghị onye ọ bụla. Nke a abụghị ihe dị mma, ọbụnadị maka vampires. N'ezie o nwere rabies.
Osisi bụ anụmanụ ahịhịa ndụ nke na-enweghị ike ịga ije. Akwụkwọ ya bụ nkume mmiri. Ìhè anyanwụ gbanwere ha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Nkume, mmiri na anyanwụ na-enye ndụ na mberede. Osisi tumadi na uto, ọ na-atọ uto ya. Uto amabeghị mkpụrụ ndụ ihe nketa, ọ na-amata ha oge niile. Atụmatụ anaghị etolite, ọbụlagodi ma ị na-eme ya. N'aka nke ozo, Osisi na eto eto na ndu.
Thickfọdụ skulls siri ike aghaalarị isi ha na isi ike. Ihe isi ike na-enye nguzogide na ịdịte aka. Ọkpụkpụ siri ike. Na-abụkarị ndị siri ike na-anọgide siri ike. Agbanyeghị, amụ bụ naanị ihe siri ike mgbe ụfọdụ. - Naanị ihe kpatara ya? - Nge ihu nke ekweghị ekwe bụ ahịrị dị mma n’ime ụlọ ahụ. Ileghara anya kwesiri ileghara anya, inwere isi ha karie. Mgbe mgbidi abụọ dakwasịrị, a na-akpọ nkukota ihu. Otu onu bu ihe si na nkpuru ogwu. Ọ bụ ya mere ọ bụghị maka ndị nkụda mmụọ. Nkume siri ike. Nkume bu ihe, o nweghi ihu, n’ihi na okwute di ka okwute ndi ozo. N'ịdị ha, ihe niile bụ otu. Kọbọd, tebụl ma ọ bụ brọsh ezé, ihe ndị a niile bụ ihe. Nkume dị ebe niilea na-akpọ ya eziokwu. Enwere ike iji okwute zoo na okpu ndị ọzọ. Ọ dị mkpa na Oge Nkume. Taa ụfọdụ okwute nwere ike ikwuworị ikwu okwu, a na-akpọ okwute ndị a "ekwentị". Ọ bụrụ na m na-eche maka ya nke ọma: Enwerekwa okwute mara mma, ya bụ gemstones. Dragons na-achịkọta ha.
Anakọtara bụ ok, mgbe ụfọdụ warara. Anakọtara na-enye nchekwa dị ka ndụ ebighi ebi. Ma ọ bụ ibu. Anakọtara siri ike karịa ịnakọta. Ọ bụrụ na ịnakọta siri ike karịa ihe anakọtara, mmadụ na-ekwu maka "ịchụ nta".
Anaghị agwakọta ihe atụ n’iru ndi tozuru etozu. Onye na-enweghị atụ amachaghị nke ọma n'oge uto ya. Ọ bụ ezie na iju mmiri ahụ nwere ike ịba ọgaranya, ọ na-enye onyinye mgbe ụfọdụ, yabụ enweghị oke abụghị naanị ihe na-abaghị uru, ọ na-egbochikwa ihe dị ndụ ahụ na oganihu ya. Ihe na-enweghị atụ bụ naanị ihe mkpofu.
Hugo nwere nsogbu. Ọnọdụ ya bụ okirikiri ahụ na-enye ya nsogbu na ihuenyo. Nke ahụ gbara Hugo ara. Hugo nwere ntụpọ n'ihu ya ruo ọtụtụ iri afọ. Guzo n'ihu enyo ahụ, o lere anya n'okirikiri ahụ ruo mgbe onye na-ahụ maka mmiri ya wepụrụ isi a. Hugo nwere olulu mmiri. Kama ọ bụ naanị maka nsogbu dịịrị otu onye. Ọ bụrụ na ihe niile nwere nsogbu, dị ka windo a kpụrụ akpụ kpamkpam, Hugo emetaghị ya n'obi. Hugo nwere nsogbu n'ezie.
Echiche efu ahụ na-enye nwanyị nwanyị ya nkụ kpọnwụrụ akpọnwụ. Nwanyị isi awọ na-akpọ neurosis. Ọ nweghị mmerụ ahụ ọ bụla, ọ bụ Woody Allen. Nwere ike ịchị ọchị maka neurosis, maka weirdo bụ ndị mmadụ na-atọ ọchị. Ma snow ochie nke ahụ abụghị ihe na-enweghị mmerụ ahụ. Ọ dịghị ọbara na-asọ na nwanyị snow, ma ụnyaahụ snow na-agwụ na ya. Snoo ochie na-abanye na terapi. Usoro ọgwụgwọ dị otú ahụ bụkwa neurosis, ọ dị ọcha dị ka snow ọhụrụ.
Di na Nwunye ogwu
Nkịta na pusi na-abanye na ọgwụgwọ di na nwunye. Onye dibia bekee bu nkita. Nkịta na pusi chọrọ ichebe mmekọrịta ha. Usoro ọgwụgwọ ahụ anaghị ada ada. Maka gịnị kpatara ya? Kedu ihe nke ahụ nwere ike ịbụ? N'ezie na onye na-agwọ ọrịa, ha niile nwere nsogbu n'onwe ha.
Cheplin chịrị ọchị na okpuru ulo ka ụlọ ya nọrọ. Ọ ghagburu ọtụtụ ndị mmadụ ka ha were ya nweta ego. Agaghị-ahụ ahụhụ nke ụwa a na ụmụ nwanyị. Cheplin na-akwado iwu mmachikarị ọchị na Germany niile, ewezuga ogige a na-akpọ ọchị, ebe ndị mmadụ nwere ike ịchị ọchị mgbe ha kwuchara ego ọchị.
Ọchị ji egbugbere ọnụ ya happyụrịa. Oké ịchị ọchị na-enweta ihe ọchị. Umochị ọchị na-enweghị isi na-aga na isi nke ndị nkịtị. Ezigbo ịchị ọchị abụghị ọchị, ọ bụ naanị obi ụtọ. Naanị mmanye ọchị na-akwa njakịrị site na osisi ahụhụ.
kpamkpam na-akpa ọchị
Isolde: Detlef, gi na ya enweghi mgbe ị ga-amata ma ị na-egwu egwu.
Detlef: Ọ dị nfe: Ọ bụrụ na m na-ekpori ndụ, m dị njọ, ma ọ bụrụ na m dị njọ, ọ bụ ihe egwuregwu.
Isolde: Gini ka m g’esi doo iche na nke ozo?
Detlef: Nke mbụ bụ ikpe na ụbọchị, nke ikpe azụ na ụbọchị ndị adịghị njọ. Ka ọ bụ ụzọ ọzọ gburugburu? Ọ gbagwojuru m anya.
Isolde: Agam emechu ndi mmadu ihe a!
Dr. Dr. Kackebart-Struller: Otto! Actually mara ihe ị na - eme na ozone? Na akụkụ aka ekpe ọ bụla, ọ bụghị naanị asshole gị na-abawanye, kamakwa oghere ozone. N'egwuregwu nke ọ bụla, methane na-aga banye na mbara ikuku, nke na-eme ala. Ebibila! Anyị kwesịrị ịchekwa gburugburu ebe obibi anyị!
Otto Struller: I kwuru eziokwu, Mausi, eziokwu i kwuru. Agam aga ebe aturu ugbu a, na-enye m nri.
n’ime oke ohia
N'ime oke ọhịa, mgbọrọgwụ osisi na-ahapụ ala ha ma gafee mba ahụ. Wetuo adịghị alaghachi, kama ọ na-aga njem. Ọ na-agafe ugwu, ọ na-aga na ndagwurugwu. Mgbe ụfọdụ, ọ na-ama jijiji.
Rolling ma ọ bụ ịgbagharị bụ mmegharị nke gbaa gburugburu etiti ya. A na-ejide wiil ahụ. Mpịakọta ahụ n'onwe ya anaghị atụgharị, ọ na-anọgide bụrụ ihe na-adịghị adị n'ihe metụtara etiti ya. Ọ bụrụ na mpịakọta ga-esikwa na okirikiri gaa na square, ọ ga-agagharị n'efu. The wheel na-ahụkwa na odida obodo na-agafe ya, wheel ahụ n'onwe ya na-akwụsị.
Zuo ike ma na-emega ahụ
Nọrọ jụụ na-enwe njirimara ya. Otu nwere ike ịkọwa izu ike dịka enweghị mmegharị nke mpụga. O nweghi izu ike na disko. Ọ bụghị n'okporo ụzọ ahụ. Calmghagharị site n'ime ya na nwayọ dị mfe. Dị adị nwere udo. Enwekwara udo nke Zen Buddhism. Calmdị udo a bụ ọnwụ azụ n'ụwa, ọ dabere na mgbachi obi na igbu ọchụ. Ezigbo udo dị, na-ebi na nnwere onwe.
Hummingbird ahụ na-efe efe ka ọ bụrụ ọmarịcha obí eze ebe ndị mmadụ tụrụ. Ndi mmadu 52 n’enweghi okpu eze bi na eze. Onweghi onye obula bu eze na nzuzu n’otu oge. Ndị nọ n’obí eze ahụ bụ hermaphrodite. Could nwere ike ịme ya n'onwe gị ma ịchọrọ. Mana ha nwere mmasị karịa ịmepụta ụwa egwuregwu: ha na-atọ ụtọ. Spooling bụ egwuregwu dị egwu. Ha na Jojos, ndị eze, nọ na-achị ọchị ebe a. Ndi-eze kpube okpueze ha dika ndi nzuzu n’ime nnukwu ulo n’okpuru isi iyi. Okpueze ndị ahụ na-arụ ọrụ dị ka akwu maka hummingbirds. King Purple na-ede okwu nzuzu dị njọ. Nweghị ike igwa nwoke ụdị okwu a.
Ọrụ ọatsụ sweụ na ala nke onye ọ bụla, bụ nke na-agwụ ike, n'ihi na kama ọkpụkpụ azụ, ọrụ nwere obi ekele, jiri mpako chọọ ya mma. Mmezu gị na-achọta ọrụ na nkụchi obi. Ndị na-arụ ọrụ nwere ike ichefu ahụ ha ngwa ngwa na okpuru ulo. A na-achọsi mgbapụta maka mgbapụta, mana ọ gaghị ekweta nke ahụ. Ọrụ na-kpuo ìsì, ọ naghị achọpụta na ọ na-arụ ọrụ, ọ bụ naanị mara. Christ dika Onye Mgbapụta apụlarị kemgbe. Ndị mmadụ napụtara onwe ha site na ọrụ: na psychotherapy, ị na-arụ ọrụ onwe gị.
Ezi ije bụ ihe dị n'ime. Inyinya na-efeghari onwe ya, ma inyinya injin ya na –edu ala. Mmeghari na adi ka agaghari dika o na eme, dika ebili mmiri. Kingga ije, igwu mmiri, efe efe ma ọ bụ ịkwọ ụgbọala bụ mmegharị ọ bụla. N'oge ugbu a ị kachasị ị na-aga. I nwekwara ike ịkwaga ebe ahụ. Ma ọ dịghị onye nwere ike iguzo ya na saịtị ahụ. Stay na-anọ saịtị.
Ifufe kpochapụrụ Frigg ihu. Oge agwụla. Mmiri ahụ abanye n’ime oghere. Ihe niile na-agba ọsọ, ọ na-agba ọsọ. Mmamịrị ahụ na-agba ọsọ, anya mmiri na-agba. Onweghi onye ya na Frigg, obu ikuku. Akpụkpọ ụkwụ kpuchiri ụkwụ ya. Ọ ga - eme ma ọ bụrụ na ọ gara ụkwụ ya abụọ? Ifufe ga eburu ha, Frigg ga-enwere onwe ya. Akpụkpọ ụkwụ ya dị arọ bụ ibu arọ nke oge gara aga. Ifufe a na-akpọ Wahuna na-agafe ntutu ya. Sleipnir, ịnyịnya nke nwere ụkwụ asatọ, na-efefe Frigga. Frigga na-adọrọ mmasị, enwere ike itinye ya n'ịnyịnya na-efe chi na-efe efe, enwere ike ibugharị ya ụkwụ ọtọ, na-enweghị ya.
Ngwaọrụ ahụ na-eme ihe kachasị ọcha. Igwe anaghị ahụ ihe ọ bụla, yabụ ọ na-arụ ọrụ nke enweghị obi nkoropụ. Ọ na - eme usoro niile ndị ọrụ ahụ gbagọrọ agbagọ mere n'oge ochie. Ejiri aka na-enweghị mmetụta na ndụ, ihe eji arụ ọrụ, mmegharị na-enweghị nzube, na ebumnuche. Lee ka o si di nma mgbe igwe n’eme ihe nzuzu n’ebe anyi no. Ma ndị mepụtara igwe ndị ahụ kụrụ nzu nzu n'onwe ha. Igwe ndị ahụ ga-aga n'ihu na-emegbu anyị na nzuzu ha site na mpụga. Ọkpụkpụ ọgụgụ isi dị iche, mana ọ na-anọgide nzuzu. Anyị onwe anyị bụ naanị cog nke nnukwu igwe ụwa.
Onye nwe ya na-akpọ aka ya aka ya. Atọ nke aka ya abụghị nke onye nwe ya. Atọm ndị dị n'aka ya kwesịrị naanị maka ụdị mpako ya na ego. Mgbe onye nwe ya nwụsịrị, atom mbụ dị n'aka ya kwesịrị maka ọdịdị ọzọ. Onye nwe ya na-eche n’ụlọ n’aka ya, ọ gbanye mkpọrọgwụ n’aka ya. Mgbọrọgwụ a bụ ihe ọ bụ. Ọ bụghị aka n'onwe ya.
The apple apụl
N'ime apụl, bee na pulp na-ebikọ ọnụ. Ha abuo luru di na nwunye? Otutu mmadu noo na apple karie: nkpuru osisi, ahihia, nkpuru osisi, ya n’elu osisi. Apụl ahụ na-eche, sị: 'Enwere m ihe onwunwe, ma abụghị m akụ. Ọ bụrụ n’ilee onwe m anya, naanị ihe m na-ahụ bụ, mana enweghị ya. ' Enweghị m adị! '' Ihe ọ bụla nke apụl ugbu a na-aga n'ụzọ nke ya. Ogwe osisi na-aga n'ebe ugwu, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-aga south. Mkpụrụ dị n’ebe ọdịda anyanwụ, na iji apụl apụ n’ebe ọwụwa anyanwụ. Ọ bụkwaghị apụl, ọ dịghị. Apụl gbara alụkwaghịm adịgboroja ya.A chụpụrụ ya na ihu-ụka-ya. Ebee ka freshness apụl dị? Ọ nọ ọdụ na palọ ma nwee ike ịgba ọsọ!
Uri aburu-isi putara ihe o putara. Agbanyeghị, a na-emechi uri onye na-ede akwụkwọ nke na onye na-agụ ya enweghị ike mepee igbe ọ pụtara. Naanị onye dere ya ghọtara ihe abụ uri mgbe ọ na-ede ihe. Ma ọbụnadị onye edemede nwere ike ịnọ n'ụtụtụ echi ya.
O doro anya, ihe na-efe efe na-efe efe na-enweghị nsogbu n'enweghị ihe zoro ezo. Ulo na tumadi uzo. Ọ bụ ezie na ihe ịlele nwere ike ịbụ ibu dị arọ, ọ naghị adị mfe nchọpụta. Na transperent na-uzo
Enwetaghị ọfụma maka anụ ọ na-eri. Ọ bụ azụ kachasị ejidere. Ha na-amị amị ma na-ebi na mmiri na-akpụ akpụ, mana enwere ike ijide ya.
Mpụ ga-aba uru naanị ma ọ bụrụ na ejideghị gị. Enwe na-abịarute n'ogige ụmụ anụmanụ, ọ bụrụgodi na ọ nweghị ihe ọjọọ ọ mere. Oolọ anụ ụlọ bụ ụlọ mkpọrọ kwesịrị ekwesị maka anụmanụ. A na-atụ ụfọdụ anụ ọhịa n'ụlọ mkpọrọ. Sitmụaka na-anọdụ n'ụlọ mkpọrọ nke ọzụzụ nne na nna ha. Ndị nwunye na-anọdụ n’ụlọ mkpọrọ nke ịdabere na ego ha na di ha.
nzuzo kacha elu
Ihe nzuzo agaghị ahụ anya nke ndị ọzọ. Ọ na-anọdụ naanị ya (ma ọ bụ ya na ndị na-agba izu) na bonka, ọ nwere ike ime ihe ndị a ebe ahụ: ọ na-emebi ala, ọ na-atersụrị ọ ,ụ, ọ na-atụgharị ihe ọjọọ, ọ na-awụnye ya, na-eleda ndị ọzọ anya, na-achị gị ọchị, ọ na-atụ egwu, ọ na - echekwa onwe ya, ọ na - ajụ ma ọ bụ nwee nwa. Ihe nzuzo: anyị amaghị ihe ọ na-eme. Nke ahụ bụ ihe nzuzo.
Ife efe na-efegharị n'oké osimiri buru ibu na-enweghị ụkwụ. Na efe efe, elu na ala na-egwuri egwu megide ibe ha. Nnụnụ nwere ike na-enweghị n'ike ụwa. Nke a bụ ọgụgụ isi. Toadstools nwere ike isi fee efe, ha nwere nku ha. Nku nnụnụ na-agbadaru n'ike. Ha nọ n’ụlọ ebe ahụ. Nku bụ nku nke efe, ha nwere ike. Nnụnụ nwere ike iji efe efe efe na-enweghị nsogbu na nwamba ikuku. Otu onye ọrụ, nwere, ngwa ngwa ya na onye isi ya ma ọ bụ ihe akpọrọ akpọkasị.
Ìhè ahụ na-efe efe n'ụzọ dị mfe, na-agafe agba dị egwu. Ọ dị ka ọkụ ahụ dị n’elu. Osisi na-ese n’elu mmiri n’ihi na ọ dị mfe karịa mmiri. Bọọlụ ikuku na-ekpo ọkụ na-efegharị na mbara igwe. Ìhè ahụ na-aghọ ngwa ngwa. Ihe nzuzu na-eme n'ụzọ dị mfe.
Anwụ anwụ na-acha
Anwụrụ anwụ na-ada nke ọma. Ọ dị jụụ. Flake ahụ si n’ụwa ọzọ bịa. Ọ na-enye ụwa a ihe owuwu, ma ọ bụrụ na ndọta niile ga-ada. Na mkpanaka ebe ugwu na n'ebe ndịda, ndọta ahụ na-adaba na snow. Site na mkpanaka ụwa, snow na-ahazi mgbanwe nzuzo na ụwa. Ime magnetik ya na ndi mmadu bi na elu ala ma mee ka ha buru ndi amaala di egwu.
Nchedo bu ezigbo ihe. Nchedo bu ihe mbu ichoro: nchedo nke iwu, nchedo ulo, ihe nchedo ihe ubi, nchedo data na nchebara echiche. Havenịbeghị nleta site na Nchedo Echiche? Ọ ga-abịa, chere.
Digest na-ata ata ma na-ata ata. Digest na-ata ata ruo mgbe nri dị ezigbo mma nke na enwere ike ịgbakwunye ya na anụ nke gị. Agbanyeghị, nri mgbe niile ka na-egbu egbu. Iswa bụ nsi. Ọ bụghị ụlọ anyị. Anụmanụ nwere ike gwuo karịa mmadụ, ha bi nso ụwa.
Ihe akpọrọ ihe dị ka akpọrọ ụwa. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya ala. Iguzo na ụwa guzosiri ike. Canwa nwekwara ike ịpụta humus ma ọ bụ nkume. Akụrụngwa nke ụwa na-egbu egbu, ọ dị okirikiri ma dị arọ. Ala dị jụụ, ala dị nzuzu. Nnukwu nne ukwu enweghị ihu. She nwere ekpo ọkụ? Mgbatị rute n’ụwa, ha na-aghokwa ụwa. Mgbọrọgwụ bụ otu onye na udo nke ụwa.
Aesụ bi n'oké ihe, n'ime. Aụ na-apụ n’èzí ebe ọ na-ajụ oyi. Ọ dara nwụọ dịka anwụrụ anwụ. Mmanụ a haveụ ahụ egosipụtala ihe dị n'ime ha dị ka flakes oyi. Ka ọ dị ogologo oge snow na-ajụ oyi, ọ bụ oge osisi ekeresimesi. Ọ bụrụ na flake agbazee, owu na-ama ọtọ. Mmanụ aurụ na-agbakọ n'akụkụ ụwa niile na ike ndọda, ha na-ata ata. Nectar ahụ bụ akwụkwọ agụbeghị. Ọbụghị site na onye dere ya.
Ọnọdụ dị ukwuu na-abụkarị nnukwu ibu. N'uche, n'agbanyeghị, ibu dị obere. Ike ike. Ọ na-enwe mmetụta naanị site n'ọdịdị ya, ọ bụghị site na agba ya, n'ihi na ibu dị oke ọchịchịrị enweghị agba. Ndị dị arọ adịghị aghọta ihe ọchị. Naanị shuga enwere ike ịchị ọchị na ndị siri ike ibikọta ọnụ. Ike ndọlu sitere n’elu ma ọ bụ nke dị n’elu? Mgbe okpomoku di ike karie, o gha buru ibu. Gịnị banyere nkume nke ị na-enweghị ike ịtụgharị? Ọ dị oke arọ ma ọ bụ sie oke ike? Ọ jọgburu onwe ya! Oke dị arọ karịa obi ọjọọ. Ọ dị mfe mgbe ahụ? Ọ bụ otú ahụ ka ọ dị!
Ifufe na-efegharị n'elu osisi na ụlọ. Achọpụtaghị ike nke ikuku, naanị enwere ike ịhụ nsonaazụ ya. Ifufe mebiri ngwaahịa. Dandel na ikuku na-eku ikuku, ntụ na otu. Ifufe na-efesi ike. Mana ọ na-akụ mgbe niile.
Cracks na ụbụrụ
Ngwongwo di iche. Ọ bụ ihe pụrụ iche nye ihe ya. Ọnụ na-adị nso, a na-atụ ya mgbe niile site na ntụnyere. Otutu enweghi onye nwe ya. Isolde nwere nnukwu afọ, mana ya enweghị abụba ahụ. Ihe ọ bụla na-enweghị atụ nwere ọtụtụ. Ọ baghị uru n ’ọtụtụ ụbụrụ Einstein nwere. Ọ bụ akparamagwa ụbụrụ, ọ bụghị ọnụọgụ nke gbawara ya. Nweghị ike iji apụl na pears, naanị ha bụ ibu.
A na-akpọ iberibe nkume. Iberibe ájá dị obere pere mpe nke na ha na-etolite ịdị n'otu ọzọ dịka obodo dịpụrụ adịpụ. A na-ahụ aja ájá n'ozuzu ya. Ihe niile na-akwa ákwá, ma ájá enweghị ike iti mkpu n'ihi na ọ kpọọ nkụ. Nkume enweghị ọbara ma ọ bụ mmiri, ọbụnadị dịka ájá. Anya mmiri nke ndị dike a na-ewute nyere onyinye nnu dị ka mmiri. Ọ bụ ya mere a na-ejikarị ájá dị ka ebe mmiri dị.
Ndi mmadu noo na otutu. Mmadụ enweghị ike ịnọ naanị ya. Nwoke dika anumanu n’agha na - abu ‘‘ ndi mmadu ’’. Ìgwè mmadụ nwere ndị mmadụ. Ọbara ndị mmadụ bụ ọbara nke ebo ha. N’aka nke ọzọ, mmadụ nwere ọbara nke ha. Ya na ndị Juu ochie, ọbara Abraham gbadara n’etiti ụmụ ụmụ ya nwụrụ. Peoplemụ mmadụ na ndị amaala mmadụ nwere njirimara ha n'ime otu ahụ, ọ bụghị n'onwe ha.
Babilọn abụghị nwa: o buru oke ibu maka onye kachasị ogologo. Enwekwara skyscrapers na New York. Ma ndị na-eyi ọha egwu aghaghị ibibi ndị a n'ihi na ha chọrọ ịchọọ Chineke. Na-agba egwu maka nwa ehi ọla edo, maka uto akụ na ụba na dọkịta na-awa ahụ mma. Olee mgbe iwe Chineke ga-emesịa were kpochapụ ndị mmehie n'ihe mkpofu?
urukpu pere mpe
Fred enwetala ikike na-enwetaghị ikike gaa na nnukwu ururu ahụ ngwangwa nso Geneva n'abalị ma na-abanye ugbu a na mgbaaka okirikiri: ọ na-ahụ ụmụ irighiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-efefe.
Fred: Ndewo ụfọdụ, ị nwekwara ike ikwu okwu?
Ngwurugwu Green: Enwere m isi ọwụwa, nke jọrọ njọ n'ihi na abụ m naanị isi. Ebe ọ bụ na ndị dibia bekee chọpụtara m, enweghịzi m ike isi saa ụwa. Ọbụna ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-apụ n'anya.
Otu urughuru na-acha ọbara ọbara na-efe efe: ọ na-ewepụ asụsụ ya, nke na-acha uhie uhie karịa urughuru n'onwe ya.
urughuru uhie: M na-amụnye ego n'okpuru ịnyịnya ibu m. Ọtụtụ mgbe, ego bụ naanị ozi. Ọkụ m na-enye ihe ọmụma. A triangle ofufe site, o nwere anya n'egedege ihu ya.
Triangle: Abụ m nnukwu urukurubụba dị. N'ezie enwere obere ihe naanị na ọkụ nke physics. Obere enweghị ihe mere eme. Ka ihe na-akawanye ihe ọ bụla, ka ha na-adị. - Fred juru ya anya.
Ọgba aghara bụ ọgba aghara nke ihe ndị ọzọ dị iche iche na-eji eme ka ọ pụọ pụọ na nchedo baa n'ime ụwa na-emeghe. Ọgba ụcha bụ ụcha. Ọgba aghara na-ewepụ ihe mkpofu n'oge gara aga. Chaos na-agba egwu na amaghị ihe maka.
N’idere, asụsụ na-ekwu nwayọ n’olu, mana na-enwu n’uche. Ndị na-ede akwụkwọ bụ ihe ọkpụkpọ n'aka. A na-ede ihe mgbe niile, ọbụlagodi mgbe a na-ede ya. Ihe odide a bụ nke ikpeazụ, ọ ga-adịgide karịa mmanya dị mma. Okwu na ede ihe oge niile.
Gba egwu bụ egwu. Onye obula na agba egwu bu onye ara. Gba egwu nwekwara ike ịdị jụụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-enweghị isi. Ndị na-eche echiche ekwesịghị ịgba egwú. Gba egwu a mebisiri uche ya. N'ịchọ agụụ maka nri enweghị ịhụnanya, nzuzu dịka oke na -eri ajọ ihe ọjọọ: Miezi dị ụtọ na-eme Fressi-Fressi!
Igwe ga-esi na mbara igwe daa. Ha gbakọtara n’elu ụwa na mmiri na-asọfe osimiri. Erwin anọdụ na ụgbọ epeepe na paịpụ na teardrop. Osimiri na-asọfe ugwu. Ọkụ na-asọpụrụ nsọpụrụ Wotan n'akụkụ aka nri nke osimiri ahụ. N’elu aka ekpe bụ osisi nwere nnụnụ nkume na-anọdụ n’elu ya. Erwin gara n'ihu na-agbagharị n'ụgbọ mmiri. Ugbu a, ọ na-ada. Onye na - ahụ maka ọdịmma ahụ na - ahụ onye nwere snow n'ọdụ mmiri n'agbata agịga paini. The snowman n'anya dị ndụ, ha bụ anya nke nwere ike ihe nzuzu. Erwin gara n'ihu na-elo mmiri. Onye nọ n’aka ekpe na-akpọ ụbọ akwara. Chineke dị nso.
Nwanyị ojii nke nwere agba nwere agba na-alụ ọgụ nke ndị jụrụ oyi. Ha efe efe n’elu kpakpando, n’okpuru kpakpando, n’etiti kpakpando. Ndụ nke Titanic na-egosi na ọ na-akụda. Boatgbọ mmiri na-amị mmiri na-amịkọrọ na mmiri, ọ na-eji nwayọọ na-agbada mmiri mmiri apịtị: Peng! Ash si n'elu daa. Eyjafjallajökull akpachara.
Kama nke ahụ, a na-ahụta ihe kwesịrị ekwesị dịka ịhụnanya. Dị ka ihe metụtara ya, Fit na-emekọ otu na nke ọzọ yana ọrụ yiri ya. Ihe nile dakọtara n’otu nhazi. Beer, sịga na ashtrays dị n’elu tebụl Maazi Alki. Nke ahụ na-eme uche, ọ dabara. Tebụl Maazi Alki ekwupụtara bụ ihe owuwu. Hinz na Kunz nọ na nnukwu ụlọ ndekọ akụkọ ụwa ọnụ na ntanetị. Hinz na Kunz jikọtara naanị ịdị adị ha. Internetntanetị abụghị ihe owuwu, mana nzuzu.
Ihe nwere isi awọ n’onwe ya; ọ dịghị ihe ọzọ. Ihe adịghị ele anya. Machinewa ụwa nke enweghị ihu na-achị ụwa: ịntanetị nke ihe. Ihe juputara ụwa. Ọ dịla anya ụwa chọtara ụwa. Anaghị ekwu maka ihe ndị dị ndụ n'ihi na ha na-onwe ha. Agbanyeghị, obere ihe nwere ike ịmegharị onwe ya. Ọ bụ ihe.
Meta nwere ike ịbụ nke ziri ezi, jiri ịhụnanya nye chi ndị enyi. Dika onye nkuzi, ihe oria n’edo aghaghi iwere nwa akwukwo ike. Nwa akwụkwọ ahụ ejupụtala, ndụ ya ga-edugharị azụ, ụlọ ọrụ nwere ike iwepụta ọkụ eletrik site na mgbochi mmiri.
Ihe ndị a niile bụ mgbakwunye nke ọtụtụ ihe na njedebe nke enweghị izu ike. Ihe a niile bụcha ihe niile ugbu a? Ihe niile dịkarịa ala ihe dị okirikiri. Dị ka a tụrụ anya ya, ihe niile kwesịrị ịdị na-achagharị na nsọtụ ya, mana ọ ka na-acha ntụ ebe ahụ. Onye ụkọchukwu na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-ekwu, sị: "Ihe niile karịrị ọnụ ọgụgụ nke akụkụ ya!" Ọbụna mgbe ahịrịokwu a, ihe niile anaghị enwu, a gaghị ahụ ihe anya. Ihe a dum na-achoghi ihe nile. Enwere naanị otu ihe n'ime akwụkwọ a.
Onweghi ihe bu uwa nke ihe ndi ozo. Iko abụghị oche. Uwe abụghị igwe ojii. Notghara ikwu banyere nkịta ahụ: Nkịta bụ nwamba dị ka nza. Ihe ndị na - abụghị ihe na - ezukọta n'ime ụwa nke ihe efu. Fọdụ na-ekwu na ọ nweghị ihe na-abịa ma mmadụ nwụọ. Want chọrọ ibi ebe ahụ n'etiti ndị na-abụghị ihe? Ọ ga-adị mma nke ukwuu n’ime ụlọ nke ihe na-abụghị ihe.
Ymentymentụ ọ moreụ chọrọ karịa ihe dị mkpa. Ya mere, obi uto na obi uto. Ma n’agbanyeghi na obi uto bu onyinye ndu, obi uto abughi nke mmadu. Ihe ọjoụ na-echere ma na-anọ. Entọ obi ụtọ. Letọ ụtọ bụ oke agụụ nwere oke. Jotọ obi ụtọ echeghị, obi ụtọ dị umengwụ maka nke ahụ. Mgbe eriri afọ na-egwu nri karịa ka ọ chọrọ, ọ na-enwe obi ụtọ. Afọ ojuju bụ ihe ụtọ, mana shuga bụ obi ụtọ.